သိပ်ထျန်တဲ့ကောင်မလေး - Grand Parents-Day
Home / Book / သိပ်ထျန်တဲ့ကောင်မလေး
ကျွန်တော် ကိုမောင်မောင်ကို အတော်မကျေမနပ်ဖြစ်မိတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ….ကျွန်တော့်ပိုင်နက်ထဲက အစာကို လက်ရဲ ဇက်ရဲနဲ့ မခန့်လေးစား လုယူခဲ့တာကိုး။ ဒါကတော့….မဖြစ်သင့်ဘူး….။ သူဘယ်လောက် ချမ်းသာချမ်းသာ… ကျွန်တော့်ထက် ဘယ်လောက်ဘဲ အဆင့်မြင့်မြင့်ပေါ့။ အခုတော့….ကျွန်တော့်မှာ နေရခက်….တွေးရခက်နဲ့ သူပေးထားတဲ့ လခကလဲ မနည်းဘူးလေ။ နောက်ပြီး ဆိုင်တစ်ခုလုံးမှာ ကျွန်တော် အခွင့်အရေးအရဆုံးပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို စော်ကား ခဲ့တယ်။ စောက်ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ အထာကို ပြခဲ့တယ်။ ” အင်း….ကိုမောင်မောင် ခင်ဗျား ကျွန်တော်နဲ့ တွေ့တော့မယ်….တောက်….” ကြိတ်မနိုင်ခဲမရကျိန်းဝါးခါ ခေါင်းလည်းများလှပြီ ဒါပေမယ့် သူမကြားဘူး။ သူ့ရှေ့မှာတော့ ခပ်တည်တည်ပဲပေါ့။ ငွေကြောင့်လား။ မန္တလေးမှာ ရည်းစားနဲ့ ပြဿနာတက်လို့ ရန်ကုန်ပြေးခဲ့တယ်။ အခုရန်ကုန်မှာ လူသတ်မှုဖြစ်ပြီး ထောင်ထဲ ဝင်ရတော့မလားပဲ၊ ငွေဂုဏ်၊ ကြေးဂုဏ်၊ ရာထူးဂုဏ် ပြည့်တဲ့ ကျွန်တော့် ရည်းစားသီရိက ကျွန်တော့်ထက် အစစအရာရာ မြင့်မားလို့ ကျွန်တော့်အကို အရင်းကို မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး မြူဆွယ်ခဲ့တယ်။ အကိုဆိုတဲ့ နွားကလည်း ကိုယ့်ညီရည်းစား မှန်းသိရက်နဲ့ စောက်ရှက်မရှိ တွဲခုတ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် မန္တလေးမှာ နေချင်စိတ်ကုန်ပြီး ဘယ်သူ့မှ နှုတ်မဆက်ဘဲ ထွက်ခဲ့ တာ….။ ရန်ကုန်ရောက်တော့ တဏှာရူး မောင်မောင်နဲ့တွေ့ပြန်တယ်။ ကိုယ်နဲ့အိပ်ရမယ့် မိန်းမကို ပေါ်တင်ကြီး ဖြတ်လုခံရရင် ဘယ်ယောက်ျားက ကျေနပ်မှာလဲ….။
ခင်ဗျားဆိုရင်ရော ကျေနပ်မလား….မကျေနပ်ဘူးလား။ ဒါစော်ကားတာဗျ၊ အခုဆိုကြည့်လေ (၂၄)နာရီခံဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ မရွှေထားဟာ ကျွန်တော့်ဆီ ဟန်ဆောင်ပြီး တောင် မလာတော့ဘူး။ သူနဲ့ကိုမောင်မောင် ဖြစ်နေတာကို ကျွန်တော်မသိဘူးထင်ပြီး အခုဘဲယောက်ျားကို သစ္စာရှိတဲ့ မိန်းမ မြတ်လိုလို၊ ဘာလိုလိုနဲ့ လုပ်ပြနေတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရီချင်တာပေါ့…မင်းတို့ မိန်းမတွေပါးစပ်ဟလိုက်တာနဲ့ အူဘယ်နှ ခွေရှိတယ်ဆိုတာ သိတယ်လို့။ စောက်ကောင်မ မထားဆီသွားရင်လည်း အရင်ကလို ဟတ်ဟတ်ပက်ပက်မရှိတော့ဘူး….ခပ် မှန်မှန်နဲ့။ ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော်ပဲ သူ့ကိုယ်လုံးက ပြေးခဲ့ပေမယ့်….အခုတော့ သူ့ကိုတောင့်တနေမိတယ်….။ ဒါပေမယ့် ကိုမောင်မောင်က ထားကို အစွဲကြီးစွဲအောင် လုပ်ထားပြီလေ….ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ဆီ မလာတော့တာပေါ့။ ကိုမောင်မောင်နဲ့ တွေ့သမျှ မိန်းမတွေ မှန်သမျှ ကိုမောင်မောင့်ကို စွဲကြတာချည်းပဲ။ ” တောက်….ဖာသည်မနဲ့ ဝရမ်းပြေးနဲ့ နေနှင့်အုံးပေါ့….” ကျွန်တော် ဒေါသတွေ ထွက်နေသလောက်တော့ ပျော်နေမှာပေါ့…ရန်ကုန်မြို့က တစ်နေရာမှာပေါ့။ ဟုတ်လား…. ရန်ကုန်မှာ တစ်နေရာရှာတတ်ရင် ရပါတယ်။ ကိုမောင်မောင်လို လူရှုပ်တစ်ယောက်အဖို့တော့ ပိုတောင် လွယ်သေးတယ်။ တော်ပြီ….ငါ အလုပ်ထွက်မယ်….ငါ့ရှေ့မှာ မျက်နှာပြောင်တိုက်တာတွေ မကြည့်နိုင်ဘူး….လကုန်ရင် ထွက်မယ်… ဒီနေ့ (၂၅)ရက်ရှိပြီ….နောက် (၅)ရက်ပဲ စောင့်ရတော့မယ်။ ကျွန်တော် ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါသည်။ ဒီလိုလူ တွေနဲ့ ဝေးဝေးနေမှဖြစ်မယ်။ နို့မို့ရင် ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ ကိုယ်ပဲ ဒုက္ခရောက်မှာ။ အဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့ ကျွန်တော် စိတ်ငြိမ်သွားပါတယ်။ အလုပ်သာ အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့က (၂၇)ရက် ကျွန်တော် အလုပ် ထွက်ဖို့ (၃)ရက်ပဲလိုတော့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဆိုင်သိမ်းပြီး အပြင်မှာ ထမင်းထွက်စားပြီးတော့ ကျွန်တော့်အခန်းကို ကျွန်တော် ပြန်လာပြီး စာဖတ်နေမိတယ်။ ဆိုင်ရှေ့ဖက်ဆီက သော့ဖွင့်သံကြားလို့ အနှောင့်အယှက်တော့ ပေါ်ပြီလို့ သိလိုက် တယ်။
” ဟိုင်း….ရာဇာ နေကောင်းလား….အားတော့နာတယ်ကွာ….ကိုယ့်ကို အခန်းခဏသုံးခွင့်ပြုပါ….ဒီနေ့ သိပ်မိသိပ် မိုက်တဲ့ နတ်သမီးတစ်ပါးရခဲ့လို့ကွာ….အမှန်အကန်ဆရာ….မင်းတောင် မြင်ရင် ခိုက်သွားမယ်….” အခန်းသုံးခွင့်တောင်းပါတယ်လို့ ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော် ငြင်းခွင့်မရှိပါဘူး။ သူက သူဌေးပဲ အသာခေါင်းငြိမ့်ရင်း ဆိုင်ထဲကနေ သူ့နဲ့အပြင်ကို ထွက်လိုက်လာတယ်။ ” ဆွီတီ….လာခဲ့တော့ ကိုယ့်ဘော်ဒါက သဘောကောင်းပါတယ်….ပြောတယ် မဟုတ်လား….” ကျွန်တော်ရှေ့က ကိုမောင်မောင်က ကားထဲကို လှမ်းပြောလိုက်တယ်။ ကားတံခါးပွင့်လာပြီး ဆင်စွယ်နုရောင် ခြေထောက်တစ်ဖက်ကျလာတယ်။ ဟုတ်တယ်…ကိုမောင် ပြောတာဟာ ဒီတစ်ယောက်ပဲဖြစ်မှာ ကိုမောင်မောင်ကို ပတ်ပြီး ကျွန်တော် လှေကားထစ်ကို နင်းရင်းအောက်ကို ဆင်းလိုက်တယ်။ မရွှေချောကလည်း ကားထဲက ထွက်ပြီး တံခါးကို ပိတ်လိုက်ပြီ။ သိချင်စိတ်ကို ထိန်းပြီး အိနြေ္ဒရရပဲ သူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ သူကလည်း ရှက်ရွံ့ဟန်နဲ့ မျက်လုံးလေး စွေပြီး ကျွန်တော့်ကို ကြည့်လိုက်တယ်။ မျက်လုံးချင်း အစုံမှာ….” ဟင်း ” ကျွန်တော့် မျက်လုံးတွေ ပြာဝေသွားပါတယ်။ သီရိ…သီရိ ကျွန်တော်အသက်လောက်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ သီရိ ကျွန်တော်ကို အရူးလုပ်ခဲ့တဲ့ သီရိ…ပြီးတော့ ကျွန်တော့် အကို ကို ပြောင်ပြောင်နှိုက်ခဲ့တဲ့ သီရိ။ သူလည်း မျက်လုံးလေး ဝိုင်းသွားတယ်။ အရမ်းပဲ အံ့သြသွားတယ်ထင်ပါ့….။ ကိုမောင်မောင် မရိပ်မိခင်မှာပဲ နှစ်ယောက်စလုံး အိနြေ္ဒဆည်လိုက်နိုင်တယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်က နှုတ်ဆက်ခဲ့ရင် သူမသိချင် ယောင်ဆောင်နေမှာ သေချာတယ်။ ဒီလိုသစ္စာမဲ့တဲ့ မိန်းမကို နှုတ်ဆက်ဖို့လည်း မစဉ်းစားဘူး။ ” ဒေါက်….ဒေါက်….ဒေါက်…” မေးကိုမြှင့်လိုက်ရင်း ဒေါက်ဖိနပ်သံပေးရင်း အလိုးခံဖို့ ကြွကြွရွရွလေး သွားနေတဲ့ သီရိကို ကျွန်တော်နောက်ကနေ ငေးကြည့်နေမိတယ်။ ကိုမောင်မောင်ကတော့ သူရဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက် ဂုဏ်ယူနေပုံပဲ။
သီရိ သိပ်လှနေတယ်။ ကျွန်တော့် လက်ထဲမှာရှိခဲ့တုန်းကထက် လှနေတယ်။ ကျွန်တော့်အကိုရဲ့ အသွေးအသားတွေကို စုပ်မြိုပြီး တသွေးတမွေးဖြစ်နေလေရဲ့။ နဂိုကမှ ရက်ရက်စက်စက်လှတဲ့ သီရိ အခုဆို မြင်သူရူးလောက်အောင် လှနေလေရဲ့။ သူဘယ်လို ရန်ကုန်ရောက်လာတာလဲ၊ နောက်ပြီးတော့ ကိုမောင်မောင်နဲ့ ဘယ်လိုဆက်မိတာလဲ။ သီရိရဲ့ အလှကိုကြည့်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒေါသနဲ့ ရမက်မီးဟာ ကျွန်တော့်ကို ဇောချွေးတွေပြန်အောင် လုပ်နေတယ်။ သူတို့ ဘယ်လိုချစ်ကြမလဲလို့ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်မိတယ်။ နောက်ဆုံး တော့….လူ့ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်သလိုဖြစ်မယ်မှန်းသိပေမယ့် ကျွန်တော် စေ့ထားတဲ့ တံခါးကို အသာဟပြီး အသံမကြား အောင် အထဲပြန်ဝင်လိုက်မိတယ်။ ” ကိုယ် လာပြီ သီရိရေ….” ” ခစ်…ခစ်….ခစ်….ခစ်…” သီရိရဲ့ ရယ်သံခိုးခိုးခစ်ခစ်က ကျွန်တော့်ကို ဆီးပြီးလှောင်ပြောင်နေလေရဲ့….ကျွန်တော့်အဖြစ်က လွတ်သွားတဲ့ ငါး ဘယ်လောက်ကြီးလဲလို့ လာကြည့်နေရတဲ့ လူမိုက်လိုပါပဲ။ တရုတ်ကပ်ကို အသာဟပြီး ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ သီရိ ဟာ ကိုမောင်မောင် ပေါင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်း မြူးနေတယ်လေ။ ကိုမောင်မောင့် မုတ်ဆိတ်ငုတ်တိုလေးတွေနဲ့ ထိမိတိုင်း ကလေးတစ် ယောက်လို ရယ်နေရဲ့။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်ကို သတိမရတော့ဘူး။ မဆန်းပါဘူးလေ…အစထဲကမှ သစ္စာ မရှိတဲ့ မိန်းမ…။ ကိုမောင်မောင်ဟာ လက် (၆)ဖက်ပါ နတ်ဘုရားတစ်ပါးလို သီရိရဲ့ ကိုယ်အနှံ့ကို ပွတ်သပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အနမ်းတစ်ပွင့်ပေးဖို့ တစ်ပတ်လောက် တောင်းပန်ခဲ့ရတဲ့ မရွှေသီရိဟာ ကိုမောင်မောင်ရဲ့ ချောမွတ်နေတဲ့ မျက်နှာမှာ အနမ်းမိုးတွေ စွေနေရဲ့ ။ ” သီရိ….အင်္ကျီချွတ်ပေးကွာ….” ” ချွတ်ပါလား…ကိုယ့်ဖာသာ လက်မပါဘူးလား….” မူနွဲ့စွာပြောနေပေမယ့် သူမအင်္ကျီသူပဲ ချွတ်တတ်မှန်းသိလို့ အသာချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဖြူဝင်းတဲ့ အသားအရေပေါ် မှာ အနက်ရောင်ဘရာစီယာကလေးက တင်းနေတယ်။ ပြီးတော့ တင်းမာပြီးအိတဲ့ နို့အုံကြီးတွေကို မနိုင်မနင်းထိန်းထားရရှာ တယ်။ ကိုမောင်မောင်ဟာ ဘရာစီယာကိုတော့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပဲ ဖြုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။
အိုး…လှလိုက်တာ…ကျွန်တော်တစ်ခါမှ မမြင်ခဲ့ဖူးတဲ့…ဘယ်တော့မှလဲ ပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာ မဟုတ်တဲ့ ဆူဖြိုးအိဝင်း နေတဲ့ နို့အုံကြီးတွေကို မျက်တောင်မခတ်တမ်း ကြည့်နေမိတယ်။ ” လှလိုက်တာ….သီရိရယ်…ဝါးစားချင်စရာကြီး….” တွေ့သမျှ မိန်းကလေးတွေကို ရွတ်ဖတ်နေကျ ဂါထာကို ပြန်ရွတ်ပေမယ့် ဒီတစ်ခါ သူ့စကားဟာ ရာနှုန်းပြည့်မှန်ပါ တယ်။ နို့ရည်တွေ ပြည့်တင်းနေတဲ့ နို့အုံဟာ ကျွန်တော့် ရမက်ကို နိုးဆွနေပါတယ်။ သီရိကတော့ ရှက်ဟန်မတူပါဘူး။ ခပ်ပြုံးပြုံးပဲ သူ့နို့အုံကို သူပြန်ငုံ့ကြည့်နေလေရဲ့။ ကိုမောင်မောင်ဟာ သီရိရဲ့ ချည်ထားတဲ့ ဆံပင်ကြိုးကို ဖြုတ်ချလိုက်တယ်။ ကြီးမားတဲ့ အုံနဲ့ ရှည်လျားတဲ့ ဆံပင်ဟာ သီရိတို့ ထိုင်နေတဲ့ ကုတင်ပေါ်ကနေ ကျော်ပြီး ကြမ်းပြင်နဲ့ မထိတထိလေး ပုံကျသွား တယ်။ ” အို….ဘာလုပ်တာလဲ….” ချစ်စရာ ရန်တွေ့နေတဲ့ သီရိကို တစ်ချက်နမ်းလိုက်ပြီး…. ” ဘာအနှောင်အဖွဲ့မှ မထားဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ချစ်ချင်လို့ပါ မောင့်အချစ် သီရိရယ်….” ” ဒါပဲနော်….” ” ဘာလဲ မယုံဘူးလား….လာအခုပဲ လက်ထပ်မယ်….” ” ညကြီး ဘယ်လိုလက်ထပ်မလဲ….မောင် ရက်စက်ရင်တော့ သီရိသေမှာပဲ….သီရိ အချစ်ကို မောင် နောက်တီး နောက်တောက် မလုပ်ပါနဲ့….” ” သီရိရယ် ကိုယ်တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်ပဲ ချစ်တဲ့ကောင်ပါ….ဒီအသက်အရွယ်ထိ မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ် လိုမှန်းလဲမသိဘူး….သီရိကို မြင်မြင်ချင်းကိုယ်ရူးမတတ်ချစ်သွားတာ….တကယ်လို့ သီရိကိုသာ မရရင် ကိုယ်ရူးပြီ….” ” မောင်…သီရိကို ဘယ်တော့ လက်ထပ်မလဲ…..” ” အလွန်ဆုံးကြာရင် နောက်နှစ်လပေါ့ အချစ်ရယ်….အမြန်ဆုံး လက်ထပ်ကြတာပေါ့….ကိုယ်လည်း သီရိနဲ့ ခွဲမနေ နိုင်ဘူး….” ” မောင်….အခုနထွက်သွားတဲ့ လူက မောင်နဲ့ ဘယ်လိုသိတာလဲ….သိလို့ မေးတာမဟုတ်ပါဘူး….မန္တလေးမှာ တွေ့ ဖူးလားလို့ပါ….ကဲပါလေ…သူများအကြောင်းပြောမနေတော့ပါဘူး….ဘယ်ကကောင်မှန်းမသိတာ….” ” သူက သိပ်တော်တာ သီရိ….မောင်ပြီးရင် သူပဲဆိုင်ကို ဦးစီးရတယ်….ဘာလို့လဲ….သီရိက ကြည့်မရဘူးလား…..” ” အင်း….သူခိုးလို ဂျပိုးလိုနဲ့ မောင် ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီလိုအခြေအနေမဲ့ကို အလုပ်မခန့်သင့်ဘူး….” ” သီရိက အခုကတည်းက ကိုယ့် အိမ်ရှင်မနေရာယူချင်နေပြီလား….” ” ဟုတ်တယ်လေ….အမြင်မတော်ရင်တော့ ပြောရမှာပဲ…” ကိုမောင်မောင်ဟာ တီတီတာတာနဲ့ ချစ်စရာစကားတွေဆိုနေတဲ့ သီရိရဲ့ စူပွပွနှုတ်ခမ်းလေးကို ငုံ့ပြီး စုပ်ယူလိုက်ပါ တယ်။
တစ်ချိန်တစ်ခါက ကျွန်တော် စုပ်ငုံပြီး စုပ်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးပေါ့။ တစ်ချိန်တစ်ခါဆိုတာ စကားအဖြစ်ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်ပဲ တစ်ချိန်က တစ်ခါပဲ စုပ်ခဲ့ဖူးတာ။ သီရိရဲ့ နူးညံ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးဟာ ကိုမောင်မောင် ပါးစပ်ထဲ ရောက် သွားပါတယ်။ ပူလောင်တဲ့ အနမ်းရိုင်းကြောင့် သီရိတစ်ယောက် လက်ချောင်းကလေးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်ခါပြီး ကိုမောင်မောင့် လည်တိုင်ကို ခပ်တင်းတင်းလေး ဖက်ထားပါတယ်။ ကိုမောင်မောင် လက်တစ်ဖက်က ဖြိုးအိတင်းမာနေတဲ့ နို့အုံဖွေးဖွေးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်နေပါတယ်။ လက်သန်းတစ်ဆစ်ကလေး ချွန်ထွက်နေတဲ့ နို့သီးကို လက်ညှိုးလက်မ ကြားညှပ်ပြီး လှိမ့်ပွတ်နေပါတယ်။ တစ်ချက်တစ်ချက် ခပ်နာနာညစ်တယ် ထင်ပါရဲ့ သီရိတစ်ယောက် မျက်နှာမဲ့သွားတာ တွေ့ လိုက်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုမောင်မောင်ဟာ သီရိရဲ့ ကျောက်စိမ်းနားကပ်ပန်ထားတဲ့ နားရွက်ကို မြှင်းပြီး စုပ်ပေးနေပြန် တယ်။ သီရိ တစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးလေးတွေ ထလို့။ သိပ်အရသာတွေ့နေတယ်ထင်တယ်။ တရွေ့ရွေ့နဲ့ဆင်းလာပြီး သွေး ကြောလေးတွေ ထင်းနေတဲ့ သီရိရဲ့ လည်တိုင်ကို စုပ်နမ်းနေပြန်ပါတယ်။ သီရိရင်ဟာ ချုပ်ထားသလို ဝုန်းဒိုင်းကြဲနေတယ်။ အချစ်ပါရဂူ ကိုမောင်မောင်ရဲ့ လက်ထဲမှာ သီရိ တတ်သမျှ မှတ်သမျှ ပညာတွေ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ပြီး သူ့ လက်ခုတ်ထဲကရေ ဖြစ်နေပြီလေ။ သူ စုပ်ထားခဲ့တဲ့ သီရိရဲ့ နားရွက်ဟာ သွေးချေဥပြီး နီရဲနေလေရဲ့။ ဟော…လည်တိုင်မှာ လည်း အနီကွက်ကြီး ဒီလိုပဲ သီရိရဲ့ ဘဝမှာ ကိုမောင်မောင်နဲ့ ကစားမိလို့ အမဲစက်ထင်မှာ မြင်ယောင်မိတယ်။ ” အား….ဟင်း…..နာတယ်…..” လည်တိုင်ကနေ ရင်ဘတ်ကို လျှာနဲ့ လျက်ရင်း တို့ထိရင်းနဲ့ နို့ ဆီကို ဆင်းသွားလို့ ကိုမောင်မောင်ဟာ သီရိရဲ့ ညိုတိုတို နို့သီးခေါင်းကို ကိုက်လိုက်လို့ အော်တဲ့အသံပါ။ သီရိတစ်ယောက် တုန်တုန်ရီရီဖြစ်သွားတယ်။ ကမန်းကတန်း ကိုမောင်မောင်ခေါင်းကို ဖယ်ပြီး သူ့နို့သူ တယုတယငုံ့ကြည့်နေတယ်။ နို့သီးခေါင်းမှာ သွေးတွေစို့လို့။ ” ကြည့်….မကောင်းဘူး…သွေးတွေ ထွက်လာပြီ….” ” အချစ်ရဲ့ အမှတ်အသားတွေပေါ့….နာလား မကျေနပ်ရင် ပြန်ကိုက်….” ဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ သူ့ရင်ဘတ်ကို သီရိအနားသို့ မျက်လုံးတွေ မှိတ်ပြီး ရှေ့တိုးပေးလိုက်တယ်။
သီရိက မျက်စောင်း လေးထိုးရင်း ပါးစပ်အသာဟပြီး နို့ကို စို့လိုက်တယ်။ ကိုမောင်မောင် မျက်လုံးတွေ မှိတ်ထားရာက ခေါင်းနောက်လှန်သွား တယ်။ သိပ်အရသာတွေ့နေတယ်ထင်ပါ့။ ” အ….အား….” ကိုမောင်မောင်တစ်ယောက် မျက်လုံးကြီးပြူးပြီး တုန်ခါသွားတယ်။ ဝဋ်လည်ပြီ ထင်တယ်။ ဟုတ်တယ်….ကိုမောင် မောင်ရဲ့ နို့အုံမှာ သွားရာအကွင်းလိုက်ကြီး….ပြီးတော့ သွေးတွေပေါက်ပေါက်….ပေါက်ပေါက်နဲ့ ကျလို့။ ” ဟင်း…ခွေးမလေး….အရမ်းကိုက်တယ်….” သီရိ ဘာမှပြန်မပြောဘဲ ယိုစီးကျနေတဲ့ သွေးတွေကိုသာ လျှာနဲ့ အသာလိုက်ယက်နေတယ်။ ယက်ရုံနဲ့ အားမရဘူး ထင်တယ်။ ဒဏ်ရာကို ငုံပြီးအသာ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ သွေးတွေ စုပ်သောက်နေရဲ့။ “အား….ကောင်းလိုက်တာ….သီရိရယ်….အိုး….အချစ်ရယ်…..” သီရိရဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းပညာဆန်းကြောင့် ကိုမောင်မောင် ခိုက်သွားပြီထင်ရဲ့။ နှုတ်ခမ်းမှာ သွေးတွေပေနေတဲ့ သီရိ ဟာ လေပူတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်ရင်း ကိုမောင်မောင် နို့ ဆီကနေ မျက်နှာခွာလိုက်ပါတယ်။ သီရိရဲ့ မျက်နှာဟာ ထူးထူးခြားခြား ရမက်နှိုးဆွနေပါတယ်။ ကိုမောင်မောင်က သူမစို့ရသေးတဲ့ သီရိရဲ့ နို့အုံတစ်ဖက်ကို လက်နဲ့မပြီး အသာငုံ့စို့လိုက်ပြန်တယ်။ ” မကိုက်ရဘူးနော်….” ကိုမောင်မောင် ခေါင်းတစ်ချက်ငြိမ့်ပြရင်း အငမ်းမရနို့ကို စုပ်ယူနေတယ်။ သီရိလည်း မှေးစင်းသွားပြီး ကျန်နို့အုံတစ် ဖက်ကို သူ့ဖာသာ သူပွတ်ပြီး ကစားနေတယ်။ ကိုမောင်မောင်ဟာ နို့အုံကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ စုံကိုင်ပြီး နွားနို့ညစ်သလို ညစ်လျက် စို့နေတယ်။ တကယ်ပဲ နို့ထွက်သလားမသိ။ သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော် ရမက်စိတ်တွေ ကြွလာသလို ယူကြုံးမရ လည်း ဖြစ်မိတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရမယ့် ရတနာမဟုတ်လား။ ဟုတ်ပါတယ်….သီရိနို့ပြွန်ထ်ိပ်ကနေ တကယ်ပဲ နို့ရည်ကြည် တွေ စီးကျနေလေရဲ့။ ကိုမောင်မောင်ဟာ သီရိကို နို့စို့လို့ဝသွားဟန်နဲ့ သူ့ပါးစပ်ကနေ နို့ကို ဖြုတ်ပြီး သီရိကို ကုတင်ပေါ် တွန်း လှဲချလိုက်ပါတယ်။ အလိုက်သင့်ပက်လက်လှန်သွားတဲ့ သီရိရဲ့ ထမီကို ဖြေချပြီး ခြေထောက်ကနေ ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ သီရိ ရဲ့ ဖြူဝင်းချောမွတ်နေတဲ့ အသားဆိုင်တွေထဲမှာ အနက်ရောင် ပင်တီလေးက မြုပ်ဝင်နေပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ လမ်း လျှောက်ရင် ထမီအောက်အသားဆိုင်ထဲမှာ မြုပ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီအရာကိုလိုက်ကြည့်ရင်းက ခင်ဗျားတို့လည်း ရမက်ကြွဖူး ကြမှာပါ။ ပြည့်ဖြိုးသူမို့ ပေါင်ခွကြားက တြိဂံလေးဟာ အရမ်းကြီးဖောင်းမို့နေတယ်။ ကျွန်တော် အာတွေခြောက်လာပါပြီ။ ကိုမောင်မောင်လည်း သိပ်မဆိုင်းဘဲ သီရိရဲ့ စပ်စမိုင်ဒါလေးကို လိပ်ပြီးဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်။
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အလှဆိုတဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့ အသုံးအနှုန်းဟာ ဒီမှာမလုံလောက်ဘူး။ ရွှေဝါရောင် အမွှေးနုလေးတွေဟာ ဖောင်းမို့နေတဲ့ စောက်ဖုတ် ပေါ်မှာ ဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။ ပန်းနုရောင်ဖက်ကြာဘက်လေးဟာ သိသာရုံပဲ ရှိပါတယ်။ အဆီတွေနဲ့ ပြည့်တင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ဟာ ကပ်စိလို့နေပါတယ်။ ” ပြွတ်….” ” အိုး….” ကိုမောင်မောင်လည်း ကျွန်တော့်နည်းတူ စောက်ဖုတ်ရဲ့ ဖမ်းစားခံရရာကနေ စောက်ဖုတ်ကို မက်မက်မောမောနှင့် နမ်းလိုက်တယ်။ သီရိကတော့ ရှက်ဟန်နဲ့ မျက်နှာလေးကို ဟိုဖက်လှည့်နေရဲ့။ ကျွန်တော် အော်ငိုချင်စိတ်ပေါ်လာတယ်။ တစ်ချိန်တုန်းကသာ သီရိကို ကျွန်တော်နိုင်အောင် ကိုင်နိုင်ခဲ့ရင် သူ့ပစ္စည်းဟာ ကျွန်တော့်အဖို့ပဲ မဟုတ်လား…အော်… အတိတ်…။ ” ဘာဂျာမှုတ်မယ်နော်….အချစ်…” ” သွား…သိပ်ညစ်ပတ်တာပဲ….” ” ဘာညစ်တာလဲ….ကိုယ့်ဝါသနာပါတဲ့ တူရိယာက ဘာဂျာပဲ….သြော်….သီရိက ကိုယ်ဝါသနာပါတာတောင် လုပ်ပိုင် ခွင့်မပြုတော့ဘူးလား….” ” ဟင်နော်….စကားတတ်တိုင်း ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်မနေနဲ့ သိတယ်….ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာလေ….” ” ဘာလဲ….ပြောလေ….” ” လူဘာဂျာမှုတ်မလို့ မဟုတ်လား….” ” ဟဲဟဲ…ဟဲဟဲ….” ကိုမောင်မောင်တစ်ယောက် တဟဲဟဲ ရယ်လိုက်ပြီး သီရိရဲ့ ပေါင်ကို အသာဆွဲကားလိုက်တယ်။ ” အို…” သိပ်လှတာပဲ ဒီရတနာတွင်းက မိုးကုတ်က ပတ္တမြားတွင်းနဲ့ မလဲနိုင်ဘူး။ နီရဲပြီး တောက်ပနေတယ်။ ဒါတောင် အခြောက်တိုက်ပဲရှိသေး။ မထိရက် မကိုင်ရက်စရာ စောက်ဖုတ်ပေါ်ကို ကိုမောင်မောင် မျက်နှာအပ်ချလိုက်တယ်။ ” ဟင်….” သီရိတစ်ယောက် ဘယ်လောက်အိနြေ္ဒဆည်ဆည်မရပါဘူး။ မျက်နှာလေးမဲ့ပြီး ပေါင်ကြီးကို ထပ်ဖြဲသွားပါတယ်။ “အားဟား….ဟိ…ခစ်ခစ်….ခစ်….မောင်ရယ်….အို…အဟင့်….မောင့်….အားဟား…ရှီး….အင်း…ဟင်းဟင်း….” သန္တာရောင် နှုတ်ခမ်းလေးဟာ ရွှေငါးတစ်ကောင်လို ဟစိ ဟစိနဲ့ ရမက်သံတွေ ထွက်လာပါတယ်။ သီရိတစ်ယောက် ကိုမောင်မောင် လျှာအောက်မှာ နိဗ္ဗာန်ရောက်နေသလားပဲ….ပေါင်ကိုကားပြီး ဖင်ကိုကော့ကော့ပေးနေသလို လက်နှစ်ဖက်က လည်း နို့အစုံကို ဆုပ်နယ်ကစားနေတယ်။ သူတို့အတွဲကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော်လီးဟာ တောင်မတ်လာပါတယ်။ ဘယ်အချိန် က ကိုင်ထားမိလဲမသိဘူး….သတိထားမိတော့ တင်းနေတဲ့ လီးကို ခပ်ဖိဖိအုပ်ထားမိတယ်။
ကိုမောင်မောင်ဟာ သီရိ စောက်ဖုတ်ကို စိမ်ပြေနပြေ ယက်ပေးနေတယ်။ ယက်လည်းယက်ချင်စရာပဲ အရမ်းလှတယ်။ သူနဲ့ရတဲ့ လင်ဆို မလိုးဘဲ ယက်နေရမယ်ဆိုရင်တောင် ကျေကျေနပ်နပ်ယက်နေမှာပါ။ ” ကိုမောင်….ကိုမောင်….အို….အင်း….အင့်….အင့်….အား…အင့်….” ဖင်ကြီးဟာ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ကော့တက်သွားရင်း သီရိငြိမ်ကျသွားပါတယ်။ တကယ်ရုပ်သေးကြိုးပြတ်ပဲ ကိုမောင်မောင့်မျက်နှာခွာလိုက်တော့ မျက်နှာတစ်ဖက်မှာ ပေကျံနေသလို စောက်ဖုတ်ထဲကလည်း ဖြူရော်ရော် အရည်တချို့ တွဲလောင်းကျနေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ” ကောင်းရဲ့လား……ချစ်….” ” သွား….မသိဘူး….ရှက်တယ်….” ” အော်…ဟုတ်သားပဲ….နေအုံး….အရှက်ကုန်အောင် လက်ဖွဲ့ပေးမယ်….” ပြောပြောဆိုဆို ကိုမောင်မောင်ဟာ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ အသားဖြူသူမို့ ပန်းရောင်သွေးထနေတဲ့ လီးကြီးဟာ မုန်လာဥနီကြီးလို တင်းမာပြီး ခေါင်းတရမ်းရမ်းနဲ့ ပေါ်လာပါတယ်။ ” ဟယ်တော့….ကြောက်စရာကြီး….” ” ချစ်စရာလို့ပြောပါ သီရိရယ်….” ” ဟင့်အင်း….ချစ်နိုင်ပါဘူး….” မချစ်ပါဘူးလို့ ပြောနေတဲ့ သီရိရဲ့ လက်ကိုဆွဲပြီး ကိုမောင်မောင်က သူ့လီးပေါ်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကလေး ဟာ မြွေကိုအကြောက်အလန့်မရှိသလို ရဲရဲတင်းတင်းလေး ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဒစ်ကိုသေချာစူးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ ကိုမောင် မောင်ဟာ ရှေ့တစ်လှမ်းတိုးပြီး သီရိရဲ့ မေးလေးကိုအသာအယာ သူ့ဖက်ဆွဲယူလိုက်ပါတယ်။ ” သီရိကလည်း ကလဲ့စားချေတာ သိပ်ဝါသနာပါတယ်….မဟုတ်လား….ကဲအခု ကိုယ်လုပ်တာထက်သာအောင် စိတ်တိုင်းကျ ကလဲ့စားချေပြစမ်း….” ” တစ်ခါထဲ ကိုက်ဖြတ်ပစ်မှာနော်…..” ” ဒါဆိုလည်း ကိစ္စငြိမ်းသွားတာပေါ့….ဒီကောင်ကြောင့် လူတွေဒုက္ခရောက်ရတာ မဟုတ်လား….” ” သိပ်စကားတတ်….” မျက်လုံးလေးမှေးစင်းပြီး မေးကော့ရင်း ဒစ်ကို ငုံ့လိုက်တဲ့ သီရိဟန်က ချစ်စရာ။ ” အိုး….သီရိ….ကောင်းလိုက်တာကွာ…..” တစ်ချိန်တုန်းက ကျွန်တော့်ကို အနမ်းတစ်ပွင့်ပေးဖို့ကို အင်မတန်တွန့်တိုခဲ့တဲ့ သီရိအခုတော့ သူအထင်ကြီးရာ ငွေကြေးရှင် ဂုဏ်ကြီးရှင်တွေရဲ့ လီးကို မြိန်မြိန်ကြီး စုပ်ပေးနေပါတယ်။
သြော်…အချစ် သီရိရယ်….ကြည့်….လီးစုပ်ပေးနေတဲ့ ပုံကဖာသည်တစ်ယောက် အရှုံးပေးလောက်အောင် ပါးကိုချိုင့်နေအောင် ပြီးတော့ မျက်ခုံးတွေတွန့်နေအောင် စုပ်ပေးနေပုံက သူ့ဘယ်လောက်အာရုံစိုက်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေတယ်။ လီးက ပါးစပ်က စုပ်နေသလို လက်တွေက ကိုမောင်မောင် ခေါင်း ပေါ်က ဆံပင်အမွှေးတွေကို ပွတ်လိုက်….ဂွေးဥကို ကစားလိုက်နဲ့ ကိုမောင်မောင် အလိုကျ ပြုစုနေတယ်။ ဒါတွေကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်ရင်မှာ ကျင်တက်လာပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်သူတစ်ယောက် သူများနဲ့ ကိုယ်ရှေ့မှာ ပျော်ပါးနေတာ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်လေ။ ရှည်လျားနက်မှောင်တဲ့ ဆံကေသာဟာ ရေတံခွန်ကကျနေတဲ့ ရေတွေလို လှိုင်းထအောင်ကို ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ်လုပ်ရင်း လီးကို ကျကျနနစုပ်ယူပေးနေပါတယ်။ ” အား….အားဟား….ရှီး….ကျွတ်….ကျွတ်…ကျွတ်….သီရိ မောင့်အချစ်ရယ်….သိပ်တော်ပါလား…..အို….အား….. ကောင်းလိုက်တာ…..အချစ်ရယ်….အား….အား…..” ကိုမောင်မောင်တစ်ယောက် သူ့ဆံပင်သူ့လက်နဲ့ စုံခွာရင်း မချိမဆန့်အော်ငြီးနေလေရဲ့။ သူ့လည်ပင်းကြောကြီးတွေ ဟာ ထောင်ပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်လို့နေရဲ့။ သီရိ လီးစုပ်သိပ်တော်တယ်….ထင်တယ်….ကိုမောင်မောင်လို သဘာကိုတောင် ကိုင်လှုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် သီရိရဲ့အစွမ်းကလည်း မသေးဘူး။ ” ဟ….အ….အား…အား….” သီရိရဲ့ ခေါင်းကို လက်နဲ့စုံကိုင်ပြီး လီးက ပါးစပ်ထဲ အဆုံးထိမြုပ်ဝင်သွားရင်း ကိုမောင်မောင် နာနာကျင်ကျင်အော် လိုက်မိပါတယ်။ တစ်မိနစ်လောက်ပဲ ရုပ်သေးပြကွက်လို နှစ်ယောက်လုံးငြိမ်နေပြီးမှ ကိုမောင်မောင်ဟာ အိပ်ယာပေါ် ဝုန်းကနဲ ပစ်လဲသွားပါတော့တယ်။ သီရိလည်း သူ့အပေါ်သို့ ထပ်ရက်ကျလာတဲ့ ကိုမောင်မောင်ကို တင်းတင်းကြီး ပွေ့ဖက်ရင်း နှပ်နေကြတယ်။ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ ပူနွေးပြစ်ချွဲတဲ့….အတွေ့ကြောင့် အသာငုံ့ကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် သုတ်လွှတ် လိုက်မိပါလား။ မထားနဲ့ မတွေ့ရတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ စုပေါင်းသိုမှီးထားရတဲ့ အားတွေပေါ့….လက်ထဲကနေပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ တွဲပြီး ကျနေတာ နှမျောစရာဘဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖို့ အင်အားသစ်တွေပေးနိုင်မယ့် အရာတွေပါ။ ဒါပေမယ့်လေ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ လှည့်ပတ်ပြေးလွှားနေတဲ့ ရမက်တွေ ထွက်ပေါက်ခဏရသွားတာပဲ ကျေးဇူးတင်မိတယ်။
သူတို့က တော့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလဲလျောင်းလို့ပေါ့။ ကိုမောင်မောင်ဟာ စွင့်ကားနေတဲ့ သီရိရဲ့ တင်ပါးကြီးကို အသာအယာပွတ်သပ် ကစားနေတယ်။ ဘယ်သူမဆို တင်ပါးပွတ်ရင် သဘောတူတာပဲ မဟုတ်လား။ ကလေးတွေကိုပဲကြည့် သီရိလည်း မှိန်းပြီး ဇိမ် ယူနေတယ်။ ကိုမောင်မောင်လက်ဟာ တင်သားကို ပွတ်ရာကနေ တရွေ့ရွေ့နဲ့ ဖင်ကြားထဲဝင်သွားပြီး ကြားလေးကို အစုံ အဆန်ပွတ်သပ်နေတယ်။ ကြည့်နေရတဲ့ ကျွန်တော်တောင် ကြက်သီးတွေ ထမိတယ်။ ” အေမ့….” သီရိတစ်ယောက် တွန့်သွားပြီး ထိတ်လန့်သံလေးနဲ့ အော်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုမောင်မောင် ရင်ခွင်ထဲကနေ မလွတ်နိုင်ပါဘူး။ အော်မှာပေါ့ သူ့စအိုထဲကို ကိုမောင်မောင်လက်ခလယ်က ဗြုံးကနဲ ဝင်လာတာကိုး ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ပူ စပ်ပူလောင် အရသာကိုခံလိုက်ရတယ် ထင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဖင်ကိုကော့ပေးပြီး အဝင်ရလွယ်အောင် ပုံစံပြင်ထားလိုက်ပုံရ တယ်။ ” လုပ်လိုက်ရင် အရမ်းချည်းပဲ….နာသွားတာပဲ…..” ခပ်ညုညုပြောရင်း ကိုမောင်မောင် လီးကို အသာကိုင်ဆွပေးနေပါတယ်။ “ကဲ….အချစ်ကလေး….လက်စသတ်လိုက်ရအောင်…. အပြင်မှာ ရာဇာကို စောင့်ခိုင်းထားရတာ အားနာစရာကြီး…” ” အို….စောင့်ပေစေပေါ့….သူကအလုပ်သမားပဲ…” ” အဲ့လိုမပြောနဲ့လေ…..လိမ္မာရဲ့သားနဲ့….” ပြောပြောဆိုဆို သီရိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ကုတင်ခေါင်းရင်းရောက်အောင် အသာပွေ့ယူလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က သာ ကုတင်လို့ပြောတာ အမှန်တော့ ကွတ်ပြစ်ကလေးတစ်ခုပါပဲ….ခေါင်းရင်းမှာ တစ်ထွာလောက်မြင့်တဲ့ သံဘားတန်းတစ်ခု ရှိတယ်။ ကိုမောင်မောင်က အဲဒီဘားတန်းပေါ် ကျွန်တော့်ခေါင်းအုံးတင်ပြီး သီရိကို အဲဒီခေါင်းအုံးပေါ် တင်ပါးနဲ့ အထိချလိုက် တယ်။ ” အရမ်းမလုပ်နဲ့နော်….သူ့ဟာကြီးနဲ့….” ” ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ့မယ်….အချစ်လေးရယ်….” ပြီးတော့ ဟိုလိုဒီလိုနဲ့ သီရိမမြင်အောင် သူ့လက်ထဲမှာ ဘယ်အချိန်ကရောက်နေတယ် မသိဘူး ပဲစေ့လို အလုံးလေး တွေရယ် ဆိတ်မျက်ကွင်းရယ် ပေါင်းထားတဲ့ ဂွင်းကို စွပ်ချလိုက်လေတယ်။
မိန်းမများကို ဒါနဲ့ဘဲ စွဲသွားအောင် လုပ်ခဲ့တာပေါ့။ သီရိလည်း မသိရှာဘဲ မျက်လုံးလေးမှေးစင်းရင်း လိုးမယ့်အချိန်ကို ငံ့လင့်နေရှာတယ်။ ” ကဲ….အချစ်လေးရေ….” သီရိမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ရင်း မိန်းမတွေသာ ကြည့်တတ်တဲ့ ဖမ်းစားတတ်တဲ့ အကြည့်နဲ့ ကိုမောင်မောင်ကို ကြည့် နေလေရဲ့။ နှုတ်ခမ်းက ငိုမလိုလိုနဲ့ မျက်လုံးက ရီဝေနေတယ်။ တကယ့်တဏှာမင်းသမီးပုံစံပဲ။ ကိုးလိုးကန့်လန့်အောက်ကျနေ တဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုယူပြီး… ” အချစ်ဆုံး….ဒကောက်ကွေးကို လက်နဲ့ ဆွဲထား….” ” ကြည့်….ကိုယ့်အလုပ်ကို မလုပ်ဘူး….” ” လုပ်ရင် ရပါတယ်….ဒါပေမယ့် မောင်တထမ်း မယ်တရွက်ဆိုတော့ ပိုချစ်ရာရောက်တာပေါ့….” ဒကောက်ကွေးကို လက်နဲ့ကိုင်ပြီး ရင်ဘတ်နဲ့ထိလုမတတ် ဆွဲဖြဲထားတာမို့ သီရိရဲ့ စောက်ဖုတ်ဟာ လတ်လတ်ဆတ် ဆတ်နှင့် ရဲရဲနီပြီး အာနေပါတယ်။ စအိုနဲ့ စောက်ဖုတ်ကြားမှာလဲ အခုနအရည်ဖြူဖြူတွေ ခိုနေရဲ့။ ကိုမောင်မောင်ဟာ အသင့် ဖြဲစောင့်နေတဲ့ သီရိရဲ့ စောက်ခေါင်းဝရှေ့မှာ ခြေကားရပ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နီရဲနုဖတ်နေတဲ့ သီရိရဲ့ စောက်ခေါင်းဝမှာ လီးကို အသာတေ့ပြီး မွှေပေးနေတယ်။ သီရိကို စိတ်တွေထကြွသထက် ထကြွအောင် လုပ်နေတာပေါ့။ စောက်စေ့နဲ့ ဒစ်ဖျားနဲ့ တွေ့တိုင်း သီရိခမျာ တွန့်တွန့်သွားရှာတယ်။ ” ဟင့်….ဘာလုပ်နေတာလဲလို့…. “ ချိုအီတဲ့ အမူအယာနဲ့ သူဘယ်လောက်အဆင်သင့်ပြီဆိုတာကို လစ်ကနဲ ပြလိုက်သလိုပါပဲ။ အရည်တွေလည်း တအိ အိယိုကျနေလေပြီ။ ” ဗြွတ်…ဗြစ်…” မထင်မှတ်ဘဲ ခေါင်းတိုးဝင်လာတဲ့ လီးဒစ်ကြောင့် လန့်သွားရှာတယ်။ ပိုဆိုးတာက ဒစ်ရဲ့လည်ပင်းနားမှာပါလာတဲ့ ခွေးလည်ပတ်ကြောင့်ပေါ့။ စောက်ခေါင်းထဲ မဝင်သေးဘဲ စောက်စေ့ကို အမွှေးတွေက ကလိတာနဲ့ပဲ ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထနေ ရှာတယ်။ သူသိလိုက်ပြီ တစ်ခုခုတော့ ထူးခြားနေပြီလို့….။ ” မောင်….ဘာထည့်ထားလဲဟင်…ဟင်….အင့်….အို….” ကိုမောင်မောင်က နှုတ်ကနေမဖြေဘဲ အလုပ်နဲ့သာ ဖြေလိုက်ပါတယ်။ စူးမြကြမ်းရှပြီး စောက်ခေါင်းနံရံတွေကို တ ဖက်ဖက် အတင်းထိုးလှိမ့်ဝင်တဲ့ ဒဏ်ချက်ကြောင့် သီရိခမျာ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းနှင့် ဝင်လာတဲ့ လီးကို ကြောက်ရမှန်း၊ နာရမှန်းတောင် မသိဘူး။
ဖင်ကြီးကော့တက်လာပါတယ်။ ကိုမောင်မောင်က လီးကို အဆုံးထိထိုးတဲ့အပြင် ပက်ခြာလှည့်မွှေ ပေးနေတယ်။ သီရိတစ်ယောက် ဇီးကင်းလောက်ရှိတဲ့ ဇောချွေးတွေ ပျပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ငှက်ဖျားတက်သလို တုန်တုန်ရီရီဖြစ် နေလေရဲ့။ ” အမေ့….အား….အား….အမေ့ရဲ့….ဟင်း….အိုး….ကိုမောင်….အား…ဟား….အား….” ပေါင်ကို မညှာမတာဆွဲဖြဲပြီး အရူးမလေးတစ်ယောက်လို ဆောက်တည်ရာမဲ့ ရေရွတ်နေတဲ့ သီရိရဲ့ ဒူးခေါင်းတွေကို အားပြုပြီး လီးကို အဖျားကျန်ရုံလောက်သာ ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ ဒုတ်ကနဲ သားအိမ်ကို သွားဆောင့်မိအောင် အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ပြန်ထည့်လိုက်နဲ့ လိုးနေပါတယ်။ ” ပြွတ်….စွပ်….ဒုတ်…အင့်….သေပါပြီ အမေရဲ့….အား….မောင်ရယ်….ကောင်းလိုက်တာကွယ်….လိုးနာနာဆောင့် ….သီရိကို မညှာနဲ့….ဆောင့်ပါ မောင်ရဲ့….” အားရပါးရ ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပြီးပေးရင်း ရှိုက်ရှိုက်ပြောနေတဲ့ သီရိကို ကိုမောင်မောင်ဟာ အံကြီးကြိတ် မျက်လုံး ပြူးပြီး သားအိမ်ကွဲမတတ်ဆောင့်ပေးနေပါတော့တယ်။ ” အား….အင့်….အင့်….” သီရိ စောက်ခေါင်းထဲက အရည်တွေ ဝေါကနဲ ကျပြီးပြီးသွားပါတယ်။ သူ့ဒကောက်ကွေးကို လွှတ်လိုက်ပြီး ကိုမောင် မောင် ခါးကို ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ လှမ်းချိတ်ဖမ်းချုပ်ထားတယ်။ အထဲကစုပ်အားနဲ့ မရရအောင် ဆောင့်လိုးနေတဲ့ ကိုမောင်မောင် လည်း ကော့ကော့သွားပြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ ပြီးသွားတယ်။ သူ့အပေါ်မှောက်ကျလာတဲ့ ကိုမောင်မောင်ကို ဆီးဖက်ပြီး အနမ်း တစ်ပွင့်ဆုချလိုက်တယ်။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ (၂)မိနစ်လောက် နေပြီးမှ…. ” ကဲ….လစ်စို့….တော်ကြာ တည်းခိုခန်းက ကောင်တွေ လျှာရှည်နေအုံးမယ်….” နှစ်ယောက်သား ပျင်းတိပျင်းတွဲအဝတ်လဲနေတုန်းမှာ ကျွန်တော် အပြင်ကို လစ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ မမြင်နိုင်မယ့်နေရာကနေ စောင့်ကြည့်နေမိတယ်။ ထွက်လာပါပြီ….ညပိုင်းအလည်လွန်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးပုံစံမျိုးနဲ့ ကိုမောင်မောင်က သီရိခါးပုခုံးလေးကို ဖက်လို့ သီရိက ကိုမောင်မောင်ခါးကို ဖက်လို့….တော်တော်ခါးသီးတဲ့ မြင်ကွင်းပါပဲ။ ကျွန်တော့်ကိုတောင် ဂရုစိုက် ရှာမနေဘဲ လစ်သွားကြတယ်။ (၂) ဓားစာခံ သူတို့မွေးခဲ့တဲ့ ရမ္မက်မီးဟာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ တောက်လောင်နေတယ်။ အချိန်က ည(၉)နာရီပဲ ရှိသေးတယ်။
ဖာသည်များခေါ်ရင် ကောင်းမလား….အိပ်ယာပေါ်မှာ ထိုင်စဉ်းစားနေတုန်း…. ” အာကို….အာကို….အကို….ကို….အာကို….” ဆိုင်တံခါးကို လာခေါက်ခေါ်သံကြားကာမှ သတိရလိုက်ပါတယ်။ ရေခဲရေပုံးလာသိမ်းတဲ့ ကောင်မလေးပဲ တံခါးကို ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ ” ဟဲ့…နောက်ကျလှချည်လား….” ” ဟုတ်တယ်….ရေခဲတွေ အများကြီးကျန်နေသေးလို့….” ” ဒီအချိန်ကားရပါ့မလား…” ” အောက်ဆိုဒ်ကား စီးရမှာပေါ့…” ” ဟယ်…ဒါဆို ဘယ်ကိုက်မလဲ နင် အိမ်မပြန်ရင်ရလား….” ” စိတ်တော့ပူကြမှာဘဲ…ဒါပေမယ့် ကားမရလို့…အသိအိမ်မှာ အိပ်တယ်လို့ပြောရင်တော့ ရတယ်….တခါတလေ ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်….ဟိုတခါက ကားမရလို့ ဘူတာရုံမှာ သွားအိပ်ရတယ်….” လမ်းဘေးပညာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ကရင်မလေးက အရိုးခံအတိုင်း ဖွင့်ပြောရှာတယ်။ အင်း…အချိုရှာ သကာတွေ့ အပျိုရှာ ဟိုဟာတွေ့ပြီပေါ့။ နှစ်ယောက်စလုံး အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်မှပဲ။ ” ဒါဆို နင်ဒီည ဒီမှာပဲ အိပ်လိုက်….ငါတစ်ယောက်ထဲပဲရှိတယ်….” ” အားနာစရာကြီး အာကိုရယ်…” ” အို….အားနာစရာ မဟုတ်ပါဘူး….ငါလည်း ပျင်းနေတာနဲ့ အတော်ပဲ….နင် ထမင်းစားပြီးပြီလား….” ” ဟင့်အင်း….” ” ဒါဆိုရင် နင်အထဲဝင်စောင့်နေ ငါစားစရာ တစ်ခုခုသွားဝယ်ခဲ့မယ်….” ကျွန်တော် ခြေလှမ်းတွေ သွက်နေပါတယ်။ မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်း ဆိုင်ကို ခေါက်ဆွဲနှစ်ထုတ်နဲ့ ပြန်ရောက်သွား တယ်။ ကောင်မလေးက ဆာဆာနဲ့ နှစ်ထုတ်လုံး အပြောင်တီးလိုက်တယ်။ ရှက်တာတွေ ဘာတွေလဲမရှိ။ ဟန်ဆောင်မှုလည်း မရှိတဲ့ ချာတိတ်မပဲ။ ငရုတ်သီးစပ်လို့ တရှုးရှုးဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ဝင်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ” နာမည်ဘာတဲ့….ငါမေ့သွားတယ်….” ” နော်ရင်မူ…” ” အသက်ဘယ်နှနှစ်လဲ….” ” (၁၈)နှစ် မပြည့်သေးဘူး…” ” ယောက်ျားရှိလား….” ” သွား….အပျိုရှင့်…အပျို….” ” ဒါဆို ရည်းစားတော့ ထားမှာပေါ့….” ” ရည်းစားလည်း မရှိဘူး….မျက်လုံးချင်းကြိုက်တဲ့ သူတွေတော့ အများကြီး…” ကရင်မ ပီပီ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတဲ့ ကလေးမကို ကျွန်တော် သဘောကျသွားပါတယ်။ မသိမသာလေး သွေးတိုး စမ်းတဲ့အနေနဲ့ သူ့ပုခုံးပေါ် အသာလက်လှမ်းတင်လိုက်တယ်။ မျှော်လင့်ထားပုံရလို့ ဘာမှထူးခြားမှုမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဖေါင်းမို့ပြီး ပန်းနုရောင်ထနေတဲ့ ပါးပြင်ကို တစ်ချက်နမ်းလိုက်တယ်။ ” မင်း ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် ချစ်ဖို့ကောင်းတာလဲကွယ်….မင်းကို ကိုယ်ချစ်သွားတယ်….” မျက်လုံးအကြောင်သားနဲ့ ရှေ့တည့်တည့်ကိုသာ စိုက်ကြည့်ရင်း စကားပြန်မလာတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်း ထူထူအမ်းအမ်းလေး ကို အသာငုံ့စုပ်လိုက်တယ်။
သူ့လျှာလေးက မရဲတရဲတုန့်ပြန်လာလို့ အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ ကောင်မလေး ရှက်နေပုံရတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ မျက်လုံးချင်းဆိုင်မိတိုင်း ဟိုလွှဲဒီလွှဲလုပ်နေတာကိုက ချစ်စရာ။ လိုက်ဖက်က သေချာသွားပြီမို့ ခပ်ရဲရဲပဲ သူ့နို့ကိုရမ်းဆုပ်လိုက်တယ်။ အလုပ်ကြမ်းလုပ်သူမို့ အေရိုးဗစ်မကစားဘဲ ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးလှနေပါ တယ်။ ခပ်နွမ်းနွမ်းရှပ်အင်္ကျီကို အသာကြယ်သီးဖြုတ်ပြီး ချွတ်ပေးလိုက်တယ်။ အရောင်မပေါ်တဲ့ ဘော်လီဟာ ဖြူဝင်းတဲ့ သူ့ အသားရေပေါ်မှာ ပနာမတင့်လှပါဘူး။ ချိတ်နဲ့ တွယ်ထားရတဲ့ ဘော်လီကို အသာအယာချိတ်ဖြုတ် ချွတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ ကောင်မလေးကတော့ မျက်နှာကို လက်ဝါးနဲ့အုပ်ထားလေရဲ့။ ရှက်မှာပေါ့လေ…နေ့စဉ်တွေ့နေမြင်နေကျမျက်နှာတွေကိုး။ ” နော်ရင်မူ….ဘာမှ ရှက်မနေနဲ့….မင်းကို ငါ ပိုက်ဆံလည်း ပေးမယ်။ အဝတ်အစားတွေလည်း ဝယ်ပေးမယ်။ ပျော်ပျော်သာနေ ဟုတ်လား….” ” ကျမ ပိုက်ဆံ မမက်ပါဘူး….အာကို့ ကျေးဇူးတွေ ကျမအပေါ်မှာ မနည်းဘူး မဟုတ်လား….နောက်ဆို ညနေကျရင် အိမ် ပြန်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့….ဒီမှာပဲ ဝင်အိပ်လိုက်မယ်….ကျမ ဗိုက်တော့ မကြီးချင်ဘူး….ဗိုက်ကြီးလို့ လူတွေ သိကုန်ရင် ကျမ သေမှာပဲ….” ” စိတ်ချ….ဗိုက်မကြီးစေရဘူး….ကိုယ်ဆေးတွေ ဝယ်ပေးမယ်….” တတွတ်တွတ်ပြောရင်း လွတ်လပ်စွာနဲ့ တွဲကျနေတဲ့ နို့အုံကို အသာဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တယ်။ သူလည်း ချက်ချင်း စိတ်ကြွလာပုံပဲ။ နို့တွေ တင်းမာလာတယ်။ သီရိတို့လို ခေတ်မှီသူမဟုတ်တော့ ကျွန်တော်က ဦးဆောင်နေရတယ် လေ။ ပြီးတော့ ရှက်ကလည်း ရှက်ရှာမှာပေါ့။ သူ့နို့တွေကို စို့ပေးတော့ တအံ့တသြနဲ့ ကြည့်နေတယ်။ နို့သီးပါးစပ်ထဲလည်း ရောက်ရော တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး အရသာတွေ့နေရှာတယ်။ သူ့လိုအရိုင်းလေးကို ကျွန်တော့် ဆန္ဒပြေပျောက်ဖို့ သုံးရတာ တော့ရှက်စရာပဲ။ ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ နို့စို့ပေးရင်းနဲ့ပဲ ထမီကို အသာဖြေလိုက်တယ်။ ရှက်စိတ်နဲ့ အတင်းဆွဲတင် ထားပေမယ့် နို့စို့ခံရတဲ့ အရသာကြောင့် ကြာကြာမတင်နိုင်ပါဘူး။ ပြေလျော့သွားတဲ့ ထမီထဲ လက်ကိုအသာနှိုက်လိုက်တယ်။ ” ဟင်း….” ရှက်ရွံ့သံနဲ့ အတူပေါင်တွေ စိထားလို့ အမွှေးအမျှင်နည်းလှတဲ့ ဆီးခုံကိုပဲ စမ်းမိတယ်။ ရရာကိုပဲ ခပ်သာသာလေး ပွတ်သပ်ပေးနေရတာပေါ့။ ခဏနေတော့မှ တဖြေးဖြေးပေါင်ကို ပွတ်ပေးတယ်။ ပူနွေးတဲ့ ပေါင်အိုးလေးကျနေတာပဲ ပေါင် ကြားကို လက်ခလယ်နဲ့ သွင်းလို့မရသေးတော့ အကွဲကြောင်းကို လက်ခလယ်နဲ့ပဲ ပွတ်ပေးနေမိတယ်။ ကောင်မလေးရင်ထဲ မှာ အရှက်နဲ့ ရမ္မက်အားပြင်းနေပုံပါ။ စိတ်မရှည်တော့တဲ့အဆုံး သူ့ပေါင်ကို လက်နဲ့ဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ စောက် ဖုတ်ဆီ ပြန်နှိုက်လိုက်တယ်။ အင်မတန်အမွှေးနဲတာပဲ။ ကောင်မလေး ပေါင်တော့ ပြန်မစိဘူး။ ဒီအတိုင်းငြိမ်ခံနေတယ်။ အကွဲ ကြောင်းလေးကို အသာဟပြီး လက်ခလယ်ထိုးသွင်းလိုက်တော့ ဆတ်ကနဲတွန့်သွားရှာတယ်။ အထဲမှာ ပူပြီး စီးကပ်နေတယ်။ စောက်စေ့ကိုရှာပြီး အသာဆွပေးတော့ ခဏချင်းမှာပဲ တောင်ထလာပါတယ်။ သူရဲ့ အခြေအနေကို ခန့်မှန်းမိတာနဲ့ ထဘီကို အသာချွတ်ချလိုက်တယ်။
ရေဆေးငါးတစ်ကောင်လို ဖြူဖွေးနေတဲ့ အသားအရေဟာ မီးရောင်အောက်မှာ ဝင်းကနဲ ပေါ်လာပါ တယ်။ စောက်ဖုတ်နေရာလေးမှာတော့ နည်းနည်းအရောင်လွင့်သွားပါတယ်။ ” အကို….မီးပိတ်လိုက်လေ….” ” ဟေ….ဘာဖြစ်လို့လဲကွ….” ” ဟင်း….ရှက်စရာကြီး….တခြားလူတွေလည်း မီးမှောင်မှာ ချစ်ကြတာပဲ…” အော်….သူ့အသိုင်းအဝိုင်းကွက်ကွက်ကလေးမှာ ဖြစ်ပျက်တာတွေကိုပဲ သိတာမို့ ရန်ကုန်မြို့မှာ ဘယ်လောက်တိုး တက်နေပြီလဲဆိုတာ မသိရှာပါလား။ ” မီးပိတ်ရင် အရသာမရှိဘူး….နော်ရင်မူရဲ့ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ချစ်ကြမှ ကောင်းတာကွယ့်.. ….” ” ဟင်း…ရှက်စရာကြီး….” ” မရှက်ပါနဲ့ကွာ….” ခပ်ချော့ချော့ဆိုရင်းနဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကို အသာပွတ်ပေးနေရပါတယ်။ သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ သိရတာကလည်း လပိုင်း လောက်ရှိပြီလေ။ စကားသိပ်မပြောဖူးပေမယ့် လူချင်းတော့ ရင်းနှီးနေတယ်။ သူ့ဆိုင်ဘေးက ကွမ်းယာဆိုင်ကုလားနဲ့ ရန်ဖြစ် တာကို ဝင်ဖျန်ပေးရင်းနဲ့ သိခဲ့ရတာပေါ့။ နောက်တော့ ကုလားက သူ့ရေခဲပုံးကို သိမ်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်က အခ မဲ့ ဆိုင်မှာ လာထားခိုင်းရတယ်။ ဒီလောက်ပဲ အခုလို အသွေးအသားချင်းရင်းနှီးတဲ့အဆင့် ဗြုံးကနဲ ရောက်လာတော့ သူ့ကို မရှက်အောင် ထိန်းပေးနေရတယ်။ ဘာဂျာအဆင့်ကိုတော့ ကျော်သွားရတယ်။ သူတို့ဘဝက ရေမချိုးဘဲ နေတာရယ်…ပြီး တော့ သေးပေါက်ပြီး ရေတွေဘာတွေလည်း မသုံးဘူး။ ဒါကြောင့် ဘာဂျာအဆင့်ကို ကျော်ပစ်လိုက်တယ်။ သူ့စောက်ဖုတ် အရည်တွေချွဲအီနေအောင် ထွက်ပါရဲ့….ဒါပေမယ့် စောက်ခေါင်းက သိပ်ကျဉ်းတယ်။ ပြီးတော့ ကြောက်လန့်စိတ်နဲ့ စောက် ခေါင်းကို ရှုံ့ထားတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ သူ့ကိုကြည့်တော့ တော်တော်ဖီးလ်တက်နေပြီထင်တယ်။ နီရဲထူအမ်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းနှစ် လွှာဟာ လေပြင်းတိုက်ခံရတဲ့ ပွင့်ချပ်တွေလို တဖတ်ဖတ်ရိုက်ခတ်နေတယ်။ ရှက်သွေးကြောင့် မျက်နှာတစ်ခုလုံး နီရဲတွတ်နေ တာပဲ။ ပစ္စည်းတင်တဲ့ စင်ပေါ်က အမဲဆီဘူးကို ယူပြီး သူ့စောက်ခေါင်းဝမှာ နည်းနည်းသုတ်ပေးထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ပုဆိုးကို ချွတ်ချပြီး ထကြွရမ်းကားနေတဲ့ လီးမှာ နှံ့နေအောင် သုတ်ထားလိုက်တယ်။ ပြောင်တင်းကားပြီး တဆတ်ဆတ်တောင်နေတဲ့ လီးကြီးက အားရစရာပဲ ကောင်မလေး လက်ကို အသာယူပြီး လီးကို အသာကိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။
” အိုး….” ” မရှက်နဲ့လေ…ကိုင်ကြည့် နောက်လဲ လင်ယူရင် ကိုင်ရမှာပဲ….သေချာကိုင်….” သူ့လက်ကို တင်းတင်းဆုပ်ပြီး လီးပေါ်မှာ ဖိထားလိုက်တာ….မလွှဲသာ မရှောင်သာ ကိုင်ရတာပေါ့။ ပထမတော့ မရဲ တရဲလေး ဖြေးဖြေးချင်း အရသာတွေ့ပြီး ခပ်တင်းတင်းလေး ဆုပ်ထားတယ်။ ကျွန်တော်က အသာဂွင်းတိုက်ပြတော့ သူလည်း တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်နဲ့ လိုက်လုပ်နေရဲ့။ ” ဘယ်လိုလဲ….ကိုင်ရတာ အရသာရှိလား….” ” မသိဘူး….” ” အေးလေ….သိအောင် လုပ်ပေးရမှာပေါ့….” ခပ်ဖေါ့ဖေါ့ပြောရင်း သူ့ကို ကုတင်ဘေးမှာ စိတ်ကြိုက်အနေအထားဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း အလိုးခံရမယ်ဆိုတော့လည်း နော်ရင်မူတစ်ယောက် တုန်လှုပ်နေတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ပေါင်ကြားမှာ ဒူးထောက်ပြီး ဝင်ထိုင် လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကို မပြီး သူ့ပေါင်တွေကို ကျွန်တော့်ပေါင်ရင်းနားရောက်နိုင်သထက်ရောက်အောင် ဆွဲလိုက်တယ်။ ပေါင်ကို အတင်းဖြဲခံရလို့ စုပ်သပ်နေရှာရဲ့။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လီးဟာ ပန်းနုရောင်သူ့စောက်ဖုတ်ဝနဲ့ တန်းနေပါပြီ။ သူ့ကို စိတ်ကြွ အောင် လုပ်တဲ့အနေနဲ့ ပျော့ဖတ်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားကို လီးထိပ်နဲ့ ပွတ်ဆွဲမွှေရမ်းပေးနေရတယ်။ ” ဟာ….အင်း….ဟင်း….ဟင်း….ဟင်း….” ရှက်နေသူမို့ နှုတ်ခမ်းက ဖွင့်မပြောဘဲ မချိမဆန့် တွန့်လိမ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သူတောင့်တနေတာကို ဖော်ပြနေပါ တယ်။ ဒါကြောင့် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို အသာလက်မနှစ်ချောင်းနဲ့ ဆွဲဖြဲပြီး စောက်ခေါင်းဝမှာ အသင့်တေ့ပြီးဖြစ် တဲ့ လီးကြီးကို ဖိသွင်းလိုက်တယ်။ ” ဗြစ်….ဗြစ်….အား…..အမလေး….အမိုးရေ….” အော်သံဟာ တော်တော်ကျယ်သွားတယ်။ သူ့ကို ချော့မော့နေချင်တဲ့ စိတ်လည်း သိပ်မရှိလှဘူး။ စိတ်ကသိပ်ထန်နေ ပြီလေ။ ဒါကြောင့် သူ့ပါးစပ်ကို လှမ်းပိတ်လိုက်တယ်။ ” စွပ်….ဗြစ်….ဗြစ်….ဗြစ်….ဒုတ်….ဒုတ်…ဒုတ်….အီး…အင့်…အင့်….” အတင်းရုန်းကန်နေတဲ့ကြားက လီးကြီးဟာ တန်ကျင်တစ်ချောင်းလို စောက်ဖုတ်ကို ထိုးခွဲပြီး သားအိမ်ကို သွား ဆောင့်ပါတော့တယ်။ သူ့ပါးစပ်ကို မလွှတ်သေးဘူး။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ထုတ်ချည် သွင်းချည် (၁၀)မိနစ်လောက် လုပ်ပေးတော့မှ အရသာတွေ့ပြီး ငြိမ်သွားရဲ့။ အသာငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ စောက်ဖုတ်မှာ သွေးတွေရဲနေတယ်။ သနားစရာတော့ အတော် ကောင်းသား။ နေသားကျသွားပြီမို့ စောက်ဖုတ်လည်း နည်းနည်းချောင်ပြီမို့ အရည်တွေနဲ့ သွင်းရတာ ကောင်းလာတယ်။ သူ့ လည်း နာတာမေ့ပြီး ကော့ကော့ပေးနေရဲ့။
သိတယ်မဟုတ်လား။ မိန်းမတွေရဲ့ ထုံးစံ လီးအရသာတွေ့တာနဲ့ ရှက်တာ ကြောက်တာမရှိတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ သူ့ခါးကို ကိုင်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကလွှတ်အောင် ဆွဲမြောက်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ် ကိုကြွကြွပြီး အသားကုန်ဆောင့်ပေးတာပေါ့။ ” အ….အား….အင့်….အင့်…အင့်….” ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ပိုင်းသာ ကုတင်ပေါ်မှာရှိပြီး အောက်ပိုင်းကတော့ ကော့တက်နေပါတယ်။ လီးဟာ အဆုံးဝင်သွား တာမို့ အားရစရာပါပဲ။ ဒါကြောင့် စိတ်တွေသိပ်ကြွပြီး မညှာမတာ အားရပါးရ ဆောင့်ပေးနေမိတယ်။ သူလည်း ညီးတာတွေ အော်တာတွေမရှိတော့ဘူး။ တစ်ခန်းလုံး လီးဝင်ထွက်သံတွေနဲ့ ဆူနေရဲ့။ ” အင့်….အား…ဟား….အား….အား….” ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ အကြောဆွဲပြီး သုတ်ရည်တွေ စောက်ခေါင်းထဲကနေ ကုတင်ပေါ်သို့ ယိုစီးကျလာပါတယ်။ ပြီး တော့ အဝတ်တစ်ခုလို ပုံကျသွားလေရဲ့။ ပျော့ဖတ်နေတဲ့ နော်ရင်မူ ကိုယ်ကို ထိန်းကိုင်ရင်း ကျွန်တော်လည်း ပြီးတဲ့အထိ ဆောင့်နေရတာပေါ့။ ခဏနေတော့ သုတ်ရည်တွေ လီးထဲက ပန်းထွက်ပြီး ခွေကျသွားပါတော့တယ်။ ” နော်ရင်မူ….ကောင်းရဲ့လား….” ” အင်း….” ” အရင်တုန်းက ခုလိုခံဖူးလား….မှန်မှန်ပြောနော်….” ” ငယ်ငယ်တုန်းက (၁၄)နှစ် သမီးတုန်းကတော့ ကျောင်းက ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ လုပ်ဖူးတယ်….ဒါပေမယ့် နာလို့ပြီးအောင် မလုပ်ခဲ့ဘူး…..” ” မိုးအလင်း ခံနိုင်ပါ့မလား….” ” အကို့ သဘောပဲလေ….” (၃) စုတ်လည်းစူး စားလည်းရူး ကျွန်တော် ကိုမောင်မောင့်ကို ပညာကောင်းကောင်းပေးဖို့ကို စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ သူဟာ ကျွန်တော့်ရည်းစားကို ရော ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းမိန်းမကိုပါ ကျွန်တော့်မျက်နှာမထောက်ဘဲ လိုးခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ သီရိကတော့ ထားပါလေ။ ကျွန်တော်နဲ့ ပတ်သက်မှန်းသူမသိပါဘူး။ အဲဒီကောင်မသီရိကိုပါ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက် ပညာပေးရမယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်တွေမထုတ်ဖူးတော့ ဥာဏ်က မကောင်း၊ စဉ်းစား….စဉ်းစား။ ဆိုင်မှာရှိသမျှ ပစ္စည်း တွေရောင်းပြီး လစ်သွားရကောင်းမလား။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ဆိုင်လုံး မီးတင်ရှို့ပြီး သွားရင်ကော နောက်တစ်မျိုးက ကိုမောင် မောင်ကို ချောင်းရိုက်….ဒါမှမဟုတ်လဲ….ဝတ္ထုထဲကလို သီရိကိုဖြစ်ဖြစ် ကိုမောင်မောင်ကိုဖြစ်ဖြစ် သတ်ပြီး တစ်ယောက် ယောက်ကို လွဲချရင်တော့ ဟုတ်ပြီ….ဟုတ်ပြီ…ဒီအကြံကောင်းတယ်…တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်….ပိုင်လိုက်တဲ့ ကျွန်တော် ဟား…ဟား…ဟား…တစ်ယောက်ကသေ နောက်တစ်ယောက်က ထောင်ထဲမှာ အချိန်ဖြုန်း….ဟိုးဟိုး…မလိုက်။ ကိုမောင် မောင့် လုပ်ငန်းကို ကျွန်တော်ပဲ ဦးစီးရမှာ။ ပြီးတော့ ကိုမောင်မောင့် အမေကြီးရှိတယ်။ သူကတော့ သနားစရာပဲ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တာဝန်ယူလုပ်ကျွေးရမှာပေါ့။ ပြီးတော့ ကား…။ ကျွန်တော့်လောက် အသုံးမကျတဲ့ကောင် ဒီလောကမှာရှိပါဦးမ လား။ ကိုမောင်မောင်မှာ ညီမတစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျ။ အောင်မလေး….လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ယူထားတဲ့ ဦးနှောက်တဲ့ဗျာ… လုံးလုံးမေ့နေလိုက်တာ။ ဟေး…ဟေး…ဟေး…ဒီကောင်မလေးကို သုံးရမယ်….ဆပ်စလူးမလေး….တခါတလေ ဆိုင်ကိုလာ ရင် ဘယ်သူမှ မနေရအောင် လက်ကမြင်းကျောထတဲ့ ကောင်မလေး…ပညာအရည်အချင်းကတော့ (၉)တန်း အောင်(၁၆) နှစ် ရည်းစားထားချင်လွန်းလို့ ထွန့်ထွန့်လူးနေတယ်။ သူ့အမေကြီး အမြဲပါတော့ မကမြင်းရဲဘူး…သူ့အကိုလိုပဲ ထန်တာ… အလွန့်အလွန် ဘော်ဒီလည်း လှတယ်။ အိုကေ…ဟင်း…ဟင်း…အသက်မတူလို့ရယ် နောက်ပြီး ကိုမောင်မောင်ကို အားနာ တာရယ်ကြောင့် ကြည့်နေခဲ့တာ…အခုတော့ ဒီငန်းမလေးကို စားရတော့မယ်။ ကိုမောင်မောင် အူနုကျွဲခတ်စေရမယ်။ သီရိ ထက် အစတစ်ရာသာတဲ့ ကောင်မလေးကို ရအောင်လုပ်ပြမယ်။ ဒါနဲ့ အခွင့်အရေးကို အေးအေးဆေးဆေး စောင့်နေမိတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဆိုင်ထဲကို ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီး ဝင်လာပါပြီ။ ဒါတောင် အရွယ်က သိပ်မရောက်သေးဘူး။ ဟိုကမြင်း ဒီကမြင်းနဲ့ ကျွန်တော့် စားပွဲနားရောက်လာတယ်။ ကျန်တဲ့ လူတွေက တော့ သူ့ကိုရှင်းရ ကိုယ့်အလုပ်လုပ်ရနဲ့ အလုပ်များနေကြတယ်။ ” ကိုရာဇာကြီး…ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ….” ကျွန်တော့်ရှေ့တည့်တည့်မှာ စားပွဲကို တဒေါက်ဒေါက်နဲ့ ခေါက်ပြီး ငုံ့မေးလာတဲ့ ချာတိတ်မလေးရဲ့ ရင်သားအစုံကို ခပ်တည်တည်ပဲ စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်း ” ဆားကစ် ပုံစံသစ်လောင်းနေတယ်…စင်သီယာ ဘယ်လိုလဲ သိပ်လှနေပါလား….” ” ခစ်….ခစ်ခစ်…တကယ်လား….ဘာစားချင်လို့လဲ….” ” တကယ်ပေါ့….ဘာစားချင်လို့လဲဆိုတော့….” ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြည့်ရိုင်းတွေကို သဘောတွေ့နေပုံရတယ်။ မသိမသာ ပုံစံနဲ့ ရင်ကိုပိုပြီး မ ပေးလိုက်တယ်။ ကဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုံပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ပဲကြီးစေ့ကျော် တစ်စေ့ကို ကောက်ပြီး ဖြူဝင်းနေတဲ့ ရင်နှစ်မွှာကြားထဲ အသာထည့်လိုက် တယ်။ ” ဟယ်…ကြည့်စမ်း…ကြည့်စမ်း….သိပ်ဆိုးတာပဲ….” ပြောပြောဆိုဆို ပဲကြီးကျော်ကို ကျွန်တော့်ရှေ့မှာတင် နှိုက်ထုတ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပေါက်လိုက်တယ်။ ဇတ်ကနဲ ဖမ်းပြီး ပါးစပ်ထဲပစ်သွင်းလိုက်တယ်။ ကျွတ်ကနဲ ဝါးစားရင်း မျက်စေ့မှိတ်ပြလိုက်တယ်။ ငခူပြုံးလေးပြုံးပြီး မျက်စောင်းလေး ချိတ်ကာ ဖင်လေးကို လှုပ်ရင်း ထွက်သွားလေရဲ့။ တံခါးပေါက်အရောက်မှာ တစ်ခါလှည့်ကြည့်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတယ်။ နည်း နည်းတော့ ရင်ထိတ်မိတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်နဲ့များ သွားတိုင်မလားပဲ။ တစ်ပတ်လောက် ဘာပြဿနာမှ မရှိတော့မှ ဟင်းချနိုင်တယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်တွေ့တော့ အရင်အခါတွေကထက် ပိုရင်းနှီးသလိုပဲ ကျွန်တော့်ဆီတန်းလာပြီး မုန့်လာ ကျွေးတယ်။ ” ကိုယ်က ဒါစားချင်တာ မဟုတ်ဘူး….” ” သွားဟယ်….မနောက်နဲ့လေ…စေတနာနဲ့လည်း ကျွေးရသေးတယ်…..” စားပွဲရှေ့မှာ လာနွဲ့ပြနေတဲ့ သူ့လက်ကလေးကို အသာဖမ်းဆုပ်လိုက်မိတယ်။ အေးစက်လို့ ပြန်လည်းဆွဲမယူဘူး။ မျက်လွှာလေးချပြီး ငြိမ်နေရဲ့….။ ” သိလား….” ” ဘာလဲ….” ” ချစ်တာကို…” ” ဟင့်…အင်း…” ” အခုတော့ သိပြီမဟုတ်လား….” ” စဉ်းစားဦးမယ်….”. ဒါကတော့ ခင်ဗျားတို့ သိတဲ့အတိုင်း မူလကျီလုပ်တာပါ။ ကျွန်တော် ပွဲတဝက်နိုင်နေပြီလေ။ ဟိုလိုဒီလိုနဲ့ သူ့ဆီက အဖြေရခဲ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးက ငယ်ပေမယ့် တကယ်ချစ်တော့လည်း သိပ်အလေးအနက်ထားတာ….ကျွန်တော် အသုံး ချရတာတောင် စိတ်မသန့်ဘူး။ ကျွန်တော့်ကို သိပ်တွယ်တာနေရှာတယ် ထင်တယ်။ ချစ်ကြပြီဆိုတော့လည်း သူက ကျွန်တော့်ကို သိပ်နွဲ့တာပဲ။ အနည်းဆုံး တစ်ပတ်တစ်ခေါက် ရုပ်ရှင်သွားပြရတယ်။ ကန်တော်ကြီးကို ရံဖန်ရံခါသွားပေးရ တယ်။ အင်းလျားကို မကြာခဏသွားရတယ်။ သူနဲ့ ချစ်ကြမှပဲ အလုပ်လေးဘာလေး ပျက်တော့တယ်။ ကိုမောင်မောင်က လည်း ရိပ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆော်နဲ့ လျှောက်ကဲနေတယ်ဆိုတာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူလဲဆိုတာ မသိရှာဘူး။ ဟား…ဟား ဒါကြောင့်လည်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ သူက ကျွန်တော့် ပျက်ရက်တွေကို ဘာမှမပြောဘူး ကျွန်တော် လျှောက်လည်ပြီး ပြန်လာရင် ဘာလုပ်ခဲ့လဲ အောင်မြင်ရဲ့လား….ဘာလားနဲ့ လာနောက်နေသေးတယ်။ ရီစရာနော်…ကျွန်တော်ကတော့ ကိုင်တွယ်ရုံပဲလို့ ဖြေလိုက်တယ်။ အမှန်တော့ သိပ်ကိုင်တွယ်လို့မရဘူး။ ချာတိတ်မက ဈေးကိုင်နေတယ်။ လက်ထပ်ပြီးမှတဲ့။ စိတ်ညစ်သွားမိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ စာအုပ်ကြီးအတိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတာ မကြာခင်ကပဲ သိလာရလို့ အတော်ဝမ်းသာသွားမိ တယ်။ ” ကိုကို….မေမေ ရိပ်သာ(၉)ရက်ဝင်မယ်တဲ့….အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိကြဘူး…အိမ်ဖေါ်ကောင်မလေးလည်း ခေါ် သွားမှာ….ကိုကို ခွင့်ယူပြီး လာလည်ပါလားနော်….” ” လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ချင်တယ်ပေါ့….” ” မဟုတ်ဘူးလေ….တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေစရာ မလိုတော့ဘူးလေ….အေးအေးဆေးဆေး တွေ့လို့ရတာပေါ့….” နောက်တစ်နေ့ ကျွန်တော် ဆိုင်မှာ နေ့တစ်ဝက် ခွင့်ယူလိုက်ပါတယ်။ ရေမိုးချိုးပြီး တကိုယ်လုံးသန့်စင်ပြီး နောက်ရင်း ပြောင်ရင်းနဲ့ စင်သီယာဆီ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုမောင်မောင်ကတော့ ပြုံးဖြဲဖြဲနဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့လေရဲ့။ ဘေးဘီဝန်းကျင်နည်းနည်း ကြည့်ပြီး အသာဘဲလ်ခလုပ်နှိပ်လိုက်တော့ မချောက စောင့်နေပုံပဲ။ ချက်ချင်းတံခါးလာဖွင့်တယ်။ ” နောက်ကျတယ်….” ” ဘာလဲ….မနက် (၅)နာရီ ထလာရမလား….” ” စောင့်ရတဲ့ လူဗျိုင်းဖြစ်တော့မယ်….” တံခါးပိတ်ပြီးတာနဲ့ သူ့ကိုယ်လုံးကျစ်ကျစ်ကလေးကို ဆွဲပြီးနီရဲနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး စုတ်ပြစ် လိုက်ပါတယ်။ စင်သီယာကလည်း မရုန်းဘဲငြိမ်နေလေတော့ ကျွန်တော် အံ့သြသွားမိတယ်။ သူကလန်ကဆန် လုပ်မယ်ထင် နေတာ။ ” အချိန်တွေ အမျာကြီး ရှိပါတယ်…ကိုကိုရယ်….အပေါ်တက်ပါ….” လူကြီးလေသံနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပြောရင်း လက်ဆွဲပြီး အပေါ်ကိုခေါ်သွားတယ်။ ” လာ…ဒီမှာ….သူစားဖို့ တပင်တပန်း နွှာထားတာ….” သစ်တော်သီးတွေပါ…စိတ်ကျေနပ်အောင် စားပြလိုက်ရသေးတယ်။ ကျွန်တော်စားတာလေးကို ထိုင်ကြည့်နေတယ်။ ဒါနဲ့ ဝါးလက်စ မညက်တညက်သစ်တော်သီးလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့တေ့ပြီး ထည့်ပေးလိုက်တော့ တမြုံ့မြုံ့ဝါးနေပါတယ်။ ” ချစ်လား…” ” အင်း….” မပွင့်တပွင့်ဖြေတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲဖက်ပြီး နမ်းပစ်လိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်သား ရင်ချင်းအပ်ရင်း တဒိတ်ဒိတ် ခုန်နေတဲ့ သူ့ရင်ခုန်သံကို အတိုင်းသားကြားနေရတယ်။ ခါးသိမ်သိမ်လေးကို စမ်းပြီး ဖက်သလို ဖက်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်း နေတာကို ခွာလိုက်ပြီး သွေးကြောလေးတွေ စိမ်းထနေတဲ့ လည်တိုင်ကျော့ကျော့လေးကို သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်လို တပြွတ် ပြွတ်နဲ့ စုတ်ယူနေမိတယ်။ လက်ကလေးတွေက ကျွန်တော့်ကို သိုင်းဖက်ရင်း မှေးစင်းကျသွားလေရဲ့။ လက်တွေက တရွေ့ ရွေ့နဲ့ တီရှပ်ထဲကို ဝင်သွားတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် အံ့သြစရာတွေ့ရပြန်တယ်။ ဘော်လီမဝတ်ထားဘူး။ ဧကန္တ ကျွန်တော့်ကို ငံ့လင့်ပြီး အဆင်သင့်လုပ်ထားပုံပဲ။ နွေးထွေးတင်းမာနေပြီး အင်မတန်မှ ကိုင်လို့ကောင်းပါတယ်။ အပျိုစင်လေးမို့ နို့သီးလည်း မယ်မယ်ရရမရှိ နို့အုံတစ်ခုလုံးမှာ လိမ္မော်သီးအလတ်စားအရွယ်ဆိုတော့ လက်ထဲမှာ ပျောက်နေတယ်။ ” ဟင့်….ကိုကို….စင်သီယာကို ဘယ်တော့မှ ပစ်မသွားရဘူးနော်….ထာဝရနော်….” ကလေးတစ်ယောက်လို နားထဲမှာ တိုးတိုးလေးပြောလာတဲ့ စင်သီယာ နို့ကို တစ်ချက် ညှစ်ကလိပေးလိုက်တယ်။ သူ့ခမြာ အခုလို ကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ် နို့ညှစ်ခံနေရတာ အနေရခက်နေပုံပဲ။ ” စင်သီယာ….အင်္ကျီချွတ်ပစ်လိုက်ကွာ….” ” ကိုကို…ချွတ်ပေး….စင်သီယာ ဘာမှ လုပ်လို့မရဘူး….အရမ်းတုန်နေတယ်….” သနားစရာ တုန်ရီနေတဲ့ အပျိုမလေးရဲ့ တီရှပ်ကို အသာချွတ်ပေးပြီး ကျွန်တော့် အထိအတွေ့တော့ ဖော်မပြနိုင်တဲ့ ချမ်းသာမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။
စင်သီယာကတော့ ရှက်လွန်းလို့ ထင်ပါရဲ့ မျက်စိစုံမှိတ်ထားတယ်။ ချစ်စရာနို့အုံလေးတွေ ဟာ သူ့ရင်ဘတ်မှာ ရီးလေးခိုနေကြတယ်။ ချစ်လို့ တစ်ချက်ငုံ့နမ်းတော့ တွန့်သွားရှာတယ်။ ကဲ….ဒီလောက်ကြောက်တတ် ရင်လည်း မသိမသာ ထွက်ပြူနေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးကို သွားနဲ့ မနာတနာလေး ကိုက်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် နို့ကိုစို့တော့ အကြောတွေ တွန့်တွန့်လူးနေပါတယ်။ နို့အုံလေးကို လျှာကြမ်းကြီးနဲ့ ယက်ပေးတော့ တစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးမွှေးညှင်းဖုလေး တွေနဲ့ ပြည့်သွားလေရဲ့။ နို့အုံဟာ အခုနကထက် တင်းမာလာပါတယ်။ ချောမွတ်တဲ့ သူ့ကျောပြင်လေးကို ညင်ညင်သာသာ ပွတ်ပေးရင်း သူ့ချက်တိုင်လေးဆီကို လျှာထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ ” ကိုကို….စင်သီယာ မနေတတ်ဘူး….” ကလေးစိတ်မပျောက်သေးသူပီပီ ခြေလေးဆောင့်ပြီး ငြီးနေရှာတယ်။ နေတတ်သွားမှာပါ ကလေးရယ်….လီးနဲ့ မတွေ့ သေးလို့ပါ။ ချက်ထဲကို လျှာထိုးပြီး ဘာဂျာရဲ့ အရသာနမူနာကို မြည်းစမ်းစေလိုက်ပါတယ်။ ” ခစ်…ခစ်..ခစ်…ခစ်ခစ်….ကိုကို က သိပ်ဆိုးတာပဲ….ဟိုယက် ဒီယက်နဲ့….” ” ချစ်လို့ယက်တာပေါ့ ကလေးရယ်….မချစ်ရင် ဘယ်သူယက်မှာလဲ….” သူ့ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောရင် သိပ်သဘောကျတဲ့ စင်သီယာကို သူ့စိတ်ကြိုက်စကားလုံးနဲ့ ပင့်ပေးလိုက်တယ်။ ” ကိုကိုက ချစ်လို့ ယက်တာပေါ့….တော်တော့နော်….စင်သီယာ မနေတတ်ဘူး….” ” ဒါဆို ကို့ နို့ကို စို့ပေးနော်….” ” ဟင်း…ရှက်တယ်….” ” မရဘူး….ချစ်ရင် စို့ပေးရမယ်….” ပြောပြောဆိုဆို သူ့မျက်နှာကို ရင်ဘတ်နားကပ်ပေးလိုက်တော့ အသာပါးစပ်ဟပြီး ကလေးတစ်ယောက်လို နို့စို့တာမို့ အရသာတော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မမကြီးတွေလို ပညာမတတ်ရှာဘူး….ဂုတ်ဝဲ သူ့ဆံပင်လေးကို အသာပွတ်ပြီး စိတ်ရဲလာ အောင် ဖြေသိမ့်ပေးနေတော့ တဖြေးဖြေးစုပ်ဟန် ပြောင်းလာတယ်။ ” ကဲ…တော်ပြီ….” ” ကြည့်….ခဏလေး စို့ပြီးတော့….” သူ့မူဟန်လေးကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော် အသည်းယားလာပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး စုပ်ယူလိုက် တယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မဆိုးဘူး သူ့လျှာလေးက ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ထိုးဝင်ပြီး တုန်တုန်ရီရီနဲ့ အာခေါင်ကို လာပွတ်သပ်ပေးနေ ရဲ့။ ” ပြွတ်….မောလိုက်တာ ကိုကိုရယ်….” ဟုတ်ပါတယ်…ကြမ်းတမ်းတဲ့ ရမ္မက်လှိုင်းကြောင့် ကလေးမတော်တော်ဟိုက်သွားရာမှ နို့အုံလေးတွေ နိမ့်ချည်မြင့် ချည်နဲ့ အသက်ကို ရှိုက်ရှိုက်ရှုနေရဲ့။ ကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ သူ့စကတ်ကို အသာအောက်ကို တွန်းပေးလိုက်တော့ …. ” တော်ပြီ ကိုကိုရယ်….စင်သီယာ ရှက်လာပြီ….” ” စင်သီယာ က ကို့ကို မချစ်ဘူးလား….ချစ်သူတွေဆို ရှက်စရာမလိုဘူး….” ပြောနေတုန်းမှာပဲ သူ့ဖင်ပေါ်နေပါပြီ။ လုံးကျစ်တဲ့ တင်ပါးလေးက ကားထွက်နေရဲ့။
ဖင်ကြားထဲကို လက်ညှိုးနဲ့ ပွတ်ပေးနေတော့ ရှက်ရှက်နဲ့ ကျွန်တော့်ပုခုံးမှာ ခေါင်းမှီရင်း ငြိမ်ခံနေတယ်။ ” စင်သီယာ ကကွယ်….လိမ္မာပါတယ်….ကိုယ်ချစ်သူရဲ့ အလှကိုကြည့်ချင်တယ်….” ” ကိုကိုကလည်း သိပ်ဆိုးတာပဲ….” ” ကဲ…ရှက်ရင် ကိုကိုပါ ချွတ်ချလိုက်ပါမယ်….” ပြောပြောဆိုဆို သူ့ရှေ့မှာ ရပ်ပြီး ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ ခရမ်းသီးက ရင့်နေပြီ နှပ်လိုက်ရင်တော့ ဆွေမျိုးမေ့ သွားမှာပဲ။ ” အိုး….ကိုကိုကလဲ….” ရှက်ရှက်နဲ့ ဟိုဘက်လှည့်သွားတဲ့ စင်သီယာရဲ့ စကတ်ကို အသာဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ကမ္ဘာဦးလူသား နှစ်ဆယ်ရာစု ယဉ်ကျေးမှု အလယ်တောင်မှ ရောက်နေသလိုပါပဲလား….။ ပြောင်ရှင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကလေးမှာ စောက်မွှေးတွေဟာ အင်မတန်နုနေပါသေးတယ်။ သေချာကြည့်မှ မြင်ရတယ်။ အကွဲကြောင်းလေးက စိလို့။ ကြာကြာဆိုင်းမနေဘဲ သူ့ကိုပွေ့ပြီး နှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာဆီ မ သွားလိုက်ပါတယ်။ ဆိုဖာပေါ်ချပြီးတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး စုပ်ရင်း စောက်ဖုတ်ကို လက်ဝါးနဲ့ ပွတ်သပ်ပေးနေမိတယ်။ ပေါင်လေးနည်းနည်းကားလာမှ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ အသာပွတ်ပြီး လက်ခလယ်နဲ့ စောက်စေ့ကို ကလိပေးလိုက်တယ်။ ” ကိုကို….” ဆွဲဆွဲငင်ငင်ခေါ်ပြီး ရင်ခွင်ထဲမှာ မျက်နှာဝှက်ထားရှာတယ်။ လက်ခလယ်နဲ့ ကလိပေးရင်း ပေါင်က သိသိသာသာဖြဲ လာပြီး နည်းနည်းအရည်တွေထွက်လာတဲ့ခါ ကျွန်တော် စင်သီယာကို ဘာဂျာပေးဖို့ စလိုက်ပါတယ်။ အရည်တွေ စိုစွတ်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို အနည်းငယ်လက်နဲ့ ဖြဲလိုက်ပါတယ်။ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေ ပေါ်လာတဲ့အခါ ကျွန်တော့်လျှာကို စုချွန် ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ လျှာတစ်ခုလုံး စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်သွားပါတယ်။ ကောင်မလေး စောက်ဖုတ်ထဲ မှာ ပူနွေးပြီး စိုစွတ်နေပါတယ်။ လျှာဟာ မြွေတစ်ကောင်လို ဟိုတိုးဒီတိုးနဲ့ လျှောက်သွားနေလေရဲ့။ စင်သီယာကတော့ ဆိုဖာ ဘောင်ကိုကိုင်ပြီး ဖင်ကြီးကို ကော့မှန်းမသိ ကော့ ကော့ပေးနေတယ်။
မကြာပါဘူး….ပူနွေးပြစ်ချွဲနေတဲ့ အရည်တွေဟာ စောက်ခေါင်းထဲကနေ ချော်ရည်တွေလို စီးကျလာပါတယ်။ သူ့ခမြာတော့ ပြီးမှန်းမသိဘဲ တဆက်ဆက်အကြောဆွဲပြီး ငြိမ်ကျ သွားလေရဲ့။ ” ကောင်းရဲ့လား….စင်သီယာ….” စင်သီယာ ကိုယ် မေးတာဖြေလေ….ချစ်လို့လုပ်ပေးတာ စကားမပြောတော့ဘူးလား…. ” ကောင်း….ကောင်း…တယ်…” ” ဒီလိုမှပေါ့….ဒီမှာ ကြည့်စမ်း….” သူ့မျက်နှာမှာ ကပ်ပြတဲ့ လီးကြီးကို မြွေတစ်ကောင်မြင်သလို အလန့်တကြားနောက်ဆုတ်ရှောင်လိုက်တယ်။ ” စုပ်ပေး….” ” ဟင့်အင်း….ကြောက်တယ်….” ” ဒါဆို မချစ်လို့ဘဲ….” ” ပေးလေ….စုပ်ပေးမယ်လေ….” ပြောပြောဆိုဆို မရဲတရဲလေး ဟပေးတဲ့ပါးစပ်မှာ အသာတေ့ပေးလိုက်တယ်။ ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဒစ်ကို အသာငုံပြီး စုပ်ပေးပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စုပ်ဖြစ်ရင်ပြီးရော နောက်မှ တဖြေးဖြေး သင်ပေးရတာပေါ့။ သူ့ပါးစပ်ထဲကို သေး တစ်စက် နှစ်စက်လောက် ပေါက်ထည့်ပေးတော့လည်း ထွေးမထုတ်ပါဘူး။ သနားတော့ သနားစရာပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ထွန့်ထွန့်လူး သွားမိတယ်။ ” အား….အား….ဟား….ဟိုး….အိုး….ကောင်းလိုက်တာ….စင်သီယာရယ်….အိုး….အချစ်ရယ်….အား….အား…စုပ် စုပ်…” သူ့ခေါင်းလေးကို ကိုင်ပြီး လီးနဲ့ အသာရှေ့တိုးနောက်ငင်လိုက်လုပ်ပေးနေစဉ် တအားစုပ်လို့ သွေးတောင်ထွက်ပြီ အောက်မေ့နေတာ။ ” အိုး…အင့်….အင့်….အား…..” လီးတစ်ချောင်းလုံး ကျင်ကနဲဖြစ်သွားပြီး သုတ်ရည်တွေ သူ့ပါးစပ်ထဲကို ပန်းထွက်သွားတယ်။ ” မြိုချလိုက်….အားရှိတယ်….” ရှုံ့ရှုံ့မဲ့မဲ့နဲ့ မြိုချရင်း ကျွန်တော့်ကို အတင်းဖက်ထားပါတယ်။ မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားတဲ့ သူမသိအောင် သူ့အကိုအိတ် ထဲက ခိုးလာတဲ့ ဆိတ်မျက်ကွင်းနဲ့ ပဲစေ့လေးကို လီးမှာ အသာစွပ်ပြီး ဒစ်မှာ သေချာတပ်လိုက်ပါတယ်။ ” အချစ်….ဗယ်စလင်ရှိလား….” ” အင်း….” ” သြားယူခဲ့ကြာ….” ကိုယ်တုံးလုံး ဧည့်ခန်းကို ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အလှကို ကျွန်တော် ငေးကြည့်ရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖင်ကြီးက တော့ ဆွဲလေတက်လေပုံစံပဲ။ ဖင်ကြားထဲကနေ စောက်ဖုတ်လေးကို တစွန်းတစလေး တွေ့နေရတယ်။ ” ရော့….သိပ်မကြည့်နဲ့…” ” လှတာကိုး…အချစ်ရဲ့….” သူ့ဆီက ခေါင်းလိမ်းဆီကို ယူပြီး လီးမှာ အသာပွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကိုပါ နည်းနည်းလိမ်းပေး လိုက်တယ်။ ဘာလုပ်တာလဲတဲ့….နားလည်း မလည်ဘဲနဲ့ တုန်တုန်ရီရီဖြစ်နေရှာတယ်။
” မအော်နဲ့နော်….ကလေး….ဘာမှမဖြစ်ဘူး….” ချော့မော့ပြောရင်း ဆိုဖာပေါ်မှာ ခပ်ရှောရှောလေးဖြစ်အောင် အနေအထားပြင်ကာ ပြီးတော့ သူ့ခြေထောက်တွေကို ကျွန်တော့်ခါးမှာ ခွရက်ဖြစ်သွားအောင် ချိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဟနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လက်နဲ့ နည်းနည်းဖြဲပြီး ဆိတ်မျက်ကွင်းနဲ့ ပွတ်သတ်ပေးနေမိတယ်။ ” ကိုကို….ကိုကို….အို့…ယားတယ်….” ချက်ချင်းပဲ စောက်ခေါင်းတစ်ခုလုံး အရည်တွေရွှဲသွားပါတယ်။ ဒစ်ကို အဝမှာတေ့ထားလိုက်ပြီး နည်းနည်းထိုးသွင်း လိုက်ပါတယ်။ အားကနဲ အော်ရင်း ဆီးတွန်းထားတယ်။ ဒါနဲ့အချိန်ယူပြီး ဝင်သလောက်နဲ့ပဲ ဆွဆွပေးနေလိုက်တယ်။ တဟင်း ဟင်းနဲ့ ဖြစ်လာပြီး တစ်ချက်ခြင်းထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ သားရေကွင်းတစ်ခုလုံး ကြပ်သိပ်နေပြီး နောက်နည်းနည်းတိုးရင် ကွဲ ထွက်သွားမယ့်ပုံစံပဲ။ ဒါပေမယ့်….မကွဲပါဘူး…. ” ဗြိ….ဗြစ်….အင်း….အား….နာတယ်…ကိုကိုရဲ့…..” မျက်ရည်တွေတောင် စီးကျနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ချော့မော့ပြီး သူ့ကို ချော့ကာမော့ကာဖြင့် ချစ်စကားတွေဆိုနေတော့ တယ်။ ပြီးမှ…. ” ဗြိ….ဗြစ်….ဒုတ်….အား…အ….အား…အ…အ…ဒုတ်….အင့်….ကိုကို….” ပန်းတိုင်ရောက်သွားပါပြီ။ သူကတော့ ခံရခက်ပြီး မသက်သာပါဘူး။ အပျိုစင်မှေးကွဲသွားပြီး သားအိမ်ကလည်း အ တော်ခံနေပြီ။ ပြီးတော့ စောက်ပတ်လည်း နည်းနည်းကွဲသွားတယ် ထင်တယ်။ ငိုတာမှ တအားပဲ….။ ကျွန်တော့်ရင်ကို ထုထု နေတယ်။ နာတာကိုး….။ ဒါပေမယ့် ဆိတ်မျက်ကွင်းရဲ့ တန်ခိုးနဲ့ ချက်ချင်းပဲ အငိုတိတ်သွားပါတယ်။ တဟီးဟီး တဟားဟားနဲ့ ငှက်ဖျားတက်သလို တက်ချင်နေပြီ။ သူ့အကိုပစ္စည်းက အတော်စွမ်းတာပဲ။ ဒါနဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကလေးထဲမှာ လှည့်ပတ်ထိုး မွှေပြီး ကောင်းကောင်းလိုးနေမိတယ်။ ” ကိုကို….ကိုကို….ကိုကို….အင့်အင်း….အား….” ကျွန်တော့်ကို တဖွဖွခေါ်ရင်း လည်ပင်းကို အတင်းဖက်ထားပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကလည်း လီးကို ညှစ်ပြီး ဆုပ်ယူ နေတယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့အရသာပါ။ သူလေးဟာ ဖင်ကို ကော့ကော့ပေးရင်း ဖင်ကြီးကော့တက်လာပါတယ်။ ” အား….အာ….အား…” အကြိမ်ကြိမ်ပြီးခဲ့တာမို့ ဆိုဖာပေါ်ကနေပြီး ကြမ်းပြင်နားဆီသို့ သူ့အရည်တွေ အိုင်ထွန်းနေပါတယ်။
ကျွန်တော့် ခါးကို ခြေထောက်နဲ့ ညှပ်ထားပြီး နောက်ဆုံးအကြိမ်ပြီးသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်က မပြီးသေးတော့ သူ့စောက်ခေါင်းမှာ အသာစိမ် ထားရတာပေါ့။ နည်းနည်းကြာမှ ဆက်ဆောင့်ပေးလိုက်တော့ သူ့စောက်ခေါင်းလေး ရှုံ့သွားပါတယ်။ ” ချစ်တယ် စင်သီယာရယ်….” ” သိပ်ချစ်တယ် ကိုကိုရယ်….” သိပ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စင်သီယာကို အသာမပြီး ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပေးလိုက်တယ်။ သူလည်း အရသာတွေ့နေပြီမို့ အလိုက်သင့်ပဲ။ ဆူဆူလေးဟနေတဲ့ စအိုဝမှာ လီးကိုအသာတေ့ပြီး ခပ်ဖိဖိလေး ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ အော်လိုက်တာ မိုးကြိုး ပစ်မတတ်ပဲ။ ကျဉ်းကျဉ်းကြပ်နေလို့ ကျွန်တော့်လီးလည်း အတော်နာသွားတယ်။ ” အီး….ဟီးဟီး….မလုပ်နဲ့….မလုပ်နဲ့….နာတယ်….နာတယ်….ဟီးဟီး….” ငိုကြီးချက်မနဲ့ အော်နေတဲ့ သူ့ကို ဗိုက်ပေါ်ကနေ လက်လျှိုပြီး စောက်ဖုတ်ထဲ လက်ထည့်မွှေပေးမှ ငြိမ်သွားတယ်။ လီးကို သိပ်ကြိုက်နေပြီ။ တဖြေးဖြေးချင်း ချော့သွင်းလိုက်ပြန်ထုတ်လိုက်နဲ့ လုပ်ပေးနေတယ်။ (၁၅)မိနစ်လောက် ကြာတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဂွေးဥလေးဟာ ဖင်ပေါက်မှာ တွဲလွဲကျန်တဲ့အထိ မြှုပ်ဝင်သွားတယ်။ ခါးကို လက်တစ်ဖက်က ကိုင် ကျန်တဲ့ လက်တစ်ဖက်က စောက်ဖုတ်ကို ကလိပေးရင်းနဲ့ မိမိစိတ်တိုင်းကျ ဖင်လိုးပေးနေရဲ့။ ” ပြွတ်….ဗြစ်….ဗွတ်….ပြွတ်….ပြစ်….ဗြစ်….အင့်…အင်း….အိုး….အင့်….” ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ရာကနေ အသံတွေမျိုးစုံ ထွက်နေရဲ့။ တစ်နေ့ရဲ့အတွေ့အကြုံသစ်ရနေတော့ သဘောကျနေပုံ ပဲ။ လီးကြီးကို စအိုထဲမှာ မွှေပေးတော့ နာနာကျဉ်ကျဉ်အော်ရှာတယ်။ ဗြုံးဆို ကျွန်တော့်လက်ပေါ် သူ့စောက်ရည်တွေ ကျလာ ပြန်တယ်။
သိပ်ထန်တဲ့ ကောင်မလေး။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ခါးကို သေချာကိုင်ပြီး တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးရင်း နောက်ဆုံးမှာ သုတ်ရည်တွေ စအိုနဲ့ အပြည့်ပန်းထုတ်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီနေ့ကစပြီး သူနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ (၉)ရက် လုံးလုံးမ နားမနေလိုးခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း လစ်ရင်လစ်သလို လိုးခဲ့တယ်။ သူလည်း လီးကို သိပ်စွဲနေပြီလေ။ ကျွန်တော့်ကို လည်း တုန်နေအောင် ချစ်ရှာတယ်။ အကာအကွယ်အတားအဆီးတွေ လုပ်ထားတဲ့ကြားကနေ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။ သူ့ဗိုက် (၂)လရှိသွားပြီ။ အချိန်ဆွဲပြီး ဘာလုပ်ရမလဲ စဉ်းစားနေရတယ်။ ဗိုက်ကို ဖျက် ဒါမှမဟုတ် အရှက်ကွဲအောင် ထား လိုက်ရမလား။ ဒါပေမယ့်… ကျွန်တော် သူ့ကို သိပ်ချစ်နေမိပြီ။ ဒီတော့… သူ့ကို အကြံပေးလိုက်တယ်။ ဗိုက်ပြသနာ မပြောဘဲ သူနဲ့ကျွန်တော် မေတ္တာရှိနေလို့ လက်ထပ်ပေးပါလို့ ပြောလို့ အဲ့လိုမှမရရင် ခိုးပြေးမှာပဲ။ အဘွားကြီးက တရားသမား နောက်ပြီး သူမသေခင် သမီးကို စိတ်ချရတဲ့လူနဲ့ ထားခဲ့ချင်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို ခေါ်တွေ့ပြီး သေချာမေးမြန်းခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့…. ကိုမောင်မောင်ရဲ့ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတဲ့ ချစ်သူနဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကို တစ်ရက်တည်း သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ စင်သီယာမှာ ဗိုက် (၄)လ ရှိနေပြီ။ သူကတော့ သိပ်ပျော်လို့။ ကျွန်တော့် လက်စားချေမယ့် အစီအစဉ် လည်း ပျက်သွားရပြီ။ ယောက်ဖဆိုတော့ ညှာရမယ် မဟုတ်လား။ တော်တော်စည်တဲ့ မင်္ဂလာဆောင်လို့ ပြောရမှာပဲ။ လာ လိုက်တဲ့လူတွေ ကျွန်တော်တစ်ပြားသားမှ မကုန်ဘဲ အကုန်အကျခံတယ်။ အားလုံးနှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်မယ်အလုပ်မှာ မင်္ဂလာ ခန်းမဝင်ပေါက်ကို အဝတ်အစားဖို့ရို့ဖားရားနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ သေချာကြည့်မှ သီရိဖြစ်နေတယ်။ ဗိုက်ကြီးကြီးနဲ့။ ဟောတော့ ခက်ကြပြီပေါ့။ “ကိုမောင်မောင်ရှင်လူယုတ်မာ…..လူလိမ်….နှမချင်းမစာနာဘူး ဒီမှာရှင့်ကလေး ကျမ ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ မွေးရမလဲဟင်….” မျက်ရည်သွယ်သွယ်ကျရင်း ပြောနေတဲ့ သီရိကို ကျွန်တော် မမုန်းနိုင်တော့ပါဘူး။သူ့ရဲ့မျက်ရည်တွေကကျွန်တော့် ဒေါသတွေ ကိုတိုက်စားသွားပါပြီ။ ကိုမောင်မောင်ကတော့ဟန်မပျက် သူ့ဇနီး လက်ဆွဲပြီးခန်းမဆောင်ထဲကနေထွက်သွားပါတော့တယ်….ပြီး။